နိုင်ချေမရှိသည့် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်နေသည့် မြန်မာပြည်မှ အမျိုးသမီး ၃ ဦး( ဓာတ်ပုံသတင်း )
Burma's 'three princesses' prepare for election they have no chance of winning ယမန်နေ့က ဗြိတိန်နိုင်ငံထုတ် ဂါးဒီးယန်း သတင်းစာတွင် အထက်ပါအတိုင်း ခေါင်းစဉ်တပ် ဖော်ပြထားသည့် သတင်းဆောင်းပါးမှ ဓာတ်ပုံ ဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီး ၃ ဦးမှာ ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း (ဒု ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးကျော်ငြိမ်း၏ သမီး)၊ ဒေါ်နေရီဗဆွေ၊ (၀န်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဦးဗဆွေ၏ သမီး)၊ ဒေါ်မြသန်းသန်းနု (၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနု၏ သမီး) တို့ ဖြစ်သည်။
[ဓာတ်ပုံ - Jack Davies]
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, July 24, 2010 Links to this post
မြန်မာပြည်တွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း မြင့်လာ
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တချို့မှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်သူ တချို့ရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တချို့က သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ရေးအနေနဲ့ ရပ်ကွက်သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ လိုက်နာပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းနေတာလည်း တွေ့ရတယ်။ အိမ်အောက်မှာ ရေဝပ်တာ၊ အမှိုက်သရိုက်တွေရှိတာ၊ မြောင်းတွေမှာ ရေစီးရေလာပိတ်ဆို့နေတာ၊ မိုးရွာလို့ တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ခွက်အဟောင်းအစုတ်တွေထဲက ရေတွေကို မစွန့်ပစ်ဘဲ သည်အတိုင်းတင်ကျန်နေတာတွေကို အင်းစိန်မြို့နယ်ရဲ့ အခြေခံလူတန်းစားရပ်ကွက်တချို့မှာ တွေ့မြင်ရတယ်။
အင်းစိန်မြို့နယ် ကျောက်ချဉ်ကန်ရပ်ကွက်မှ ရာအိမ်မှူး ဦးကျော်ကျော်က “ စနေနေ့တိုင်း အပတ်စဉ်ရပ်ကွက်ထဲမှာ မြောင်းတွေ ရေစီးရေလာကောင်းအောင်၊ ပိုးလောက်လမ်း မပေါက်ပွားနိုင်အောင်၊ ခြင်မခိုအောင်းနိုင်အောင် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ဖို့ နှိုးဆော်ပေမဲ့ မလိုက်နာနိုင်ကြတာများတယ် ” လို့ ပြောတယ်။ လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားတွေက မိုးလင်းမိုးချုပ် အလုပ်လုပ်ကြရတာ၊ အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့သူကလဲ အမျိုးသမီး၊ ကလေးငယ်နဲ့ သက်ကြီးအဘိုးအဘွားအများစု ဖြစ်တဲ့အတွက် ရပ်ကွက်သန့်ရှင်းရေးအစီအစဉ်တွေမှာ ထိထိမိမိဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိဘူးလို့ ဆိုတယ်။
အင်းစိန်မြို့နယ် မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှ ဆရာမဒေါ်နီနီမြင့်က “ ကျောင်းစဖွင့်ကတည်းက ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်နဲ့ ကျောင်းဝင်းသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်တယ်။ ရေမြောင်းတွေ ရေစီးရေလာကောင်းအောင်၊ ရေစည်ရေပိုင်းတွေမှာ ပိုးလောက်လန်းစစ်တာ၊ ပိုးလောက်လန်းစားတဲ့ငါးမွေးတာတွေ လုပ်ထားတယ်၊ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာလည်း အတန်းတိုင်းကို ခြင်ဆေးဖျန်းပြီး တံခါးပိတ်ထားတယ်၊ ကျောင်းဖွင့်မှ ပြန်ဖွင့်တယ်၊ ကလေးတွေကို သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အမြဲတမ်း ပြောပြတယ်၊ ကဗျာနဲ့တစ်မျိုး၊ ပုံပြင်နဲ့တစ်မျိုး နားဝင်အောင် ပြောပြလိုက်တာပေါ့ ” လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျောင်းမှာ ဘယ်လိုပဲ ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေမဲ့ ကလေးရဲ့ နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတိုင်းကို ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ရပ်ကွက်တချို့မှာတော့ တစ်အိမ်စ၊ နှစ်အိမ်စ ခြင်ဆေးဖျန်းတာမျိုးရှိတယ်။ တစ်ရပ်ကွက်လုံး အတိုင်းတာနဲ့ ဆေးဖျန်းမယ်ဆို ထိရောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်တယ်လို့ Happy ပိုးမွှားနှိမ်နင်းရေးမှ ဦးပြုံးလွင်က ပြောပြခဲ့ကြောင်း မော်ဒန် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာပြည်မှဘဏ် အတိုး နှုန်းနည်းနည်း လျှော့ပါဦး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တချို့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ လိုအပ်တဲ့ငွေကို ဘဏ်မှာ ချေးတဲ့အခါ အတိုးများလို့ လိုသလောက်မချေးနိုင်တာ တွေ့ရတယ်။ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက “ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ငွေလိုအပ်တဲ့အချိန်ဆိုတာ ရှိတယ်၊ တချို့လုပ်ငန်းတွေက အချိန်စောင့်ရတာရှိတယ်၊ ဒီအလုပ်အတွက် ဘဏ်ကချေးရင် အတိုးက အလုပ်မစရသေးခင် တော်တော်တက်နေပြီ၊ ဘဏ်တိုးကြောင့် လိုသလောက်မချေးနိုင်ဘူး ” လို့ သူကြုံတွေ့ရပုံကို ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကစပြီး ဘဏ်မှာ ငွေချေးရင် အတိုးနှုန်း ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်အတိုးနှုန်းများလို့ လုပ်ငန်းရှင်တချို့က လိုအပ်တဲ့ငွေမချေးနိုင်ဘဲ အနည်းငယ်ပဲ ချေးယူနိုင်ပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံတချို့မှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေ စီးပွားရေးချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ အတိုးနှုန်းကို လျှော့ချထားပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာ အတိုးနှုန်းက သုံးရာခိုင်နှုန်း၊ လေးရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံဆိုရင် သုညဒသမပဲ အတိုးနှုန်းရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ သည်မှာဘဏ်တိုးနှုန်းများတာက အရင်နှစ်တွေတုန်းက ဘဏ်တွေ အကျပ်အတည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူ၊ အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေလည်း များဖို့လိုပါတယ်။ ဘဏ်တိုးနည်းရင် လုပ်ငန်းတွေပိုများလာပြီး အပြင်အတိုးနှုန်းလည်း လျော့လာမယ်လို့ တချို့က သုံးသပ်တယ်။ လက်ရှိမှာ လုပ်ငန်းကြီးတွေလောက်ပဲ ဘဏ်မှာငွေချေးနိုင်ကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းအသေးစား၊ အလတ်စားတွေနဲ့ အခုမှ စီးပွားရေးလုပ်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ ဘဏ်ကနေငွေချေးနိုင်တာနည်းတယ်လို့ သိရတယ်။ ဘဏ်တွေအနေနဲ့လည်း ငွေချေးတဲ့သူနည်းတဲ့အခါမှာ ဘဏ်မှာ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု နှေးတယ်လို့ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကဆိုပါတယ်။ ဘဏ်တိုးသာလျော့နည်းသွားရင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်အနည်းငယ်ကျသွားမှာဖြစ်လို့ ကုန်ချောပိုင်းမှာ ဈေးလျှော့နိုင်လာသလို ပို့ကုန်တွေမှာလည်း မိမိရဲ့ပစ္စည်းက ဈေးသက်သာရင် တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ်လို့ သိရတယ်။ ပြည်တွင်းထုတ်ပစ္စည်းတွေလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကျဆင်းပေမဲ့ စွမ်းအင်စရိတ်နဲ့ဘဏ်တိုးကြောင့် ဈေးနှုန်းထင်သလောက် ချလို့မရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံနေရကြောင်းမော်ဒန်ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာပြည်သူတွေ ရဲ့ အမြင်အာရုံကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးနေသည့်ကိုကျော်သူ၏စေတနာ
မျက်စိ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မိုးလွင်(ကိုမိုး)နှင့် လူနာအမေတဦး
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ “ဆေးဖြင့်ရောဂါတို့ကို ဆေးကြောအံ့” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ပြု၍ ဝေဒနာရှင် အများပြည်သူတို့အား အခမဲ့ ဆေးဝါးကုသပေးနေသော သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင် မျက်စိရောဂါ ဝေဒနာရှင်တို့အား ရေတိမ်စွဲ၍ မျက်စိအမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းနေသော မျက်စိဝေဒနာရှင်တို့အား အမြင်အာရုံ ပြန်လည်ကောင်းမွန် ကြည်လင်မှု ရရှိစေရန် မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများမှ ခွဲစိတ်ကုသပေးလျှက်ရှိရာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်အထိ မျက်စိခွဲစိတ်လူနာပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၃.၇.၂၀၁၀ (ကြာသပတေး) နေ့တွင် ခွဲစိတ်ပြီးသော ဝေဒနာရှင် လူနာများအား စေတနာရှင် မျက်စိဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဦးမိုးလွင် မှ ပြန်လည် စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ ဝေဒနာရှင် လူနာများသည် ခွဲစိတ်ကုသပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ အလင်းဒဏ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက်၎င်း ဖုံ၊ အမှိုက်များမှ ကာကွယ်ရန်အတွက်၎င်း ဂွမ်းစ၊ မျက်စိအဖုံးများ၊ နေကာမျက်မှန် အနက်များကို တပ်ဆင်ထားကြရာ မျက်စိဆရာဝန်ကြီးနှင့် ပြသသည့် အချိန်တွင် မျက်စိဖုံးများ၊ နေကာမျက်မှန်များကို ချွတ်၍ ဆရာဝန်ကြီးမှ ခွဲစိတ်မှု အခြေအနေနှင့် မျက်စိ ၏ အမြင်စွမ်းအားတို့အား စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါသည်။
ထိုသို့ မျက်စိ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မိုးလွင်မှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးရာတွင် လူနာများမှ မိမိတို့ အမြင်အာရုံ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၀မ်းသာအားရနှင့် စေတနာရှင် ဆရာဝန်ကြီး၊ သူနာပြု ဆရာမများအား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပီတိဖြာလျက် ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ ပြောကြားရာတွင် မျက်စိလူနာတစ်ဦး ဖြစ်သူ အမေကြီးတစ်ယောက်မှ နေကာမျက်မှန် ချွတ်ပြီး ပြီးချင်း သူ၏ ရှေ့တွင် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ရိုက်ရန် ပြင်ဆင်နေသော ကျော်သူအား တွေ့မြင်သည်နှင့် “ဟယ် တော် … ကျော်သူကို အရှင်လတ်လတ်ကြီး မြင်တွေ့ရပြီတော်။ ကျော်သူ ဇာတ်ကားတွေ အားရပါးရ ကြည့်ရတော့မယ် တော့” ဟူ၍ ၀မ်းသာအားရ မျက်ရည်လည်ကာ ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် အမြင်အာရုံ ပြန်လည်ရရှိသွားပြီဖြစ်သော အမေကြီးအား ဂါရ၀ပြု ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သော အပြုံးဖြင့် ပြန်လည်ပြုံးပြပြီး မိမိ လုပ်ဆောင်ရမည့် မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့တော့သည်။
ကျွန်တော်၏ အပြုံးနောက်ကွယ်တွင် စကားလုံးပေါင်း မြောက်များစွာ ဦးနှောက်ထဲတွင် အစီအရီ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိုစကားလုံးများသည် နှုတ်မှ ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိချေ။ ယင်း စကားလုံးများသည် “အမေရေ … ကျွန်တော့်ကို တီဗီဖန်သားပြင်၊ ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားထက်မှာ ဘယ်တော့အခါမှ မြင်တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး အမေ။ နိုင်ငံတော်မှ ကျွန်တော့်ကို အနားပေး လိုက်ပြီ အမေ။ အနုပညာလောကမှ မောင်းထုတ်ခြင်း ခံလိုက်ရပြီမှာ (၃) နှစ်ရှိပြီ အမေ။ ရုပ်ရှင် အနုပညာရပ်ဆိုတာ အများပြည်သူကို ငိုခြင်း၊ ရယ်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲစေခြင်း ဆိုတဲ့ အကုသိုလ်အလုပ် မိမိ အတ္တအကျိုးအတွက် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အတ္တဟိတအလုပ်၊ ပြည်သူလူထုကို လိမ်ညာနေတဲ့ အလုပ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ပရိတ်သတ် အများပြည်သူနဲ့ အမေတို့အတွက် အမေပြောလိုက်တဲ့အတိုင်း အရှင်လတ်လတ်ကြီးနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ကြားမှာ ပြည်သူတွေရဲ့အနားမှာ ပြည်သူတွေအတွက် လိုအပ်သော၊ ပေးဆပ်နိုင်သော လူမှုရေးကိစ္စရပ်များကို ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်သက်အချိန်ထိ ကြိုးစားဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ပရဟိတလူသား တစ်ယောက်အဖြစ်သာ မြင်တွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် အမေ” ဟူသော စကားလုံးများပင် ဖြစ်တော့သည်။
ထို့ကြောင့် … အကယ်၍များ အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုကြောင့် ကျွန်တော်အား အနုပညာ လုပ်ငန်းများ ပြန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင့်များ ရရှိခဲ့သော် ကျွန်တော်သည် အနှစ်သာရ မရှိသော၊ အကျိုးမရှိသော ဖျော်ဖြေရေးသက်သက်သာ ဖော်ကျူးသည့် အများပြည်သူအား လိမ်ညာသော ဇာတ်လမ်းများကို ရိုက်မည် မဟုတ်။ သမိုင်းစစ် သမိုင်းမှန်များ၊ အတ္ထုပ္ပတိများ၊ ဘာသာရေး လူမှုရေး သမိုင်းမှတ်တိုင် အစစ်အမှန်များကိုသာ အများပြည်သူအတွက် ပေးဆပ်ရိုက်ကူးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း စိတ်ကူးယဉ် မိပါတော့သည်။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုကျော်သူ အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။မြန်မာပြည်သူတွေကို စာနာ နားလည်းမှုတွေနဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မေတ္တာ စေတနာ အပြည့်နှင့် ကူညီပေးနေသော ကိုကျော်သူ အားလေးစားလျက်ပါ။
တစ်နေ့သောအခါက ကျွန်ုပ်သည် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ တစ်နေ့တာ ပြီးဆုံးသွားချိန် ကျွန်ုပ်၏ နေအိမ် ဘုရားခန်းအတွင်း အဓိဌာန် ပုတီးစိပ်ခြင်း၊ မေတ္တာပို့သခြင်းများ ပြီးဆုံးသွားချိန် သန်းခေါင်ယံ အချိန်၌ အိပ်စက်အနားယူခြင်း မပြုလုပ်ခင် ကျွန်ုပ်၏ စာအုပ်ဗီဒိုကို မွေနှောက်ဖတ်ရှုစဉ် ကျွန်ုပ်၏ အရင်းနှီးဆုံး သွေးသောက် ဦးသန်းစိန်ထံမှ ရရှိထားသော အဖိုးတန်စာအုပ် တစ်အုပ်ဖြစ်သည့် . . . Sir J.George Scott, K.C.I.E. ရေးသားသော “SCOTT OF THE SHAN HILLS” ဟူသော စာအုပ်ကို လှန်လှောကြည့်မိရာ အောက်ပါ ဓါတ်ပုံနှင့် စာသားများကို တွေ့ရှိတော့သည်။
ယင်းဓါတ်ပုံသည် နိုင်ငံခြားသား (၂) ဦးနှင့်အတူ ဗမာလူမျိုးများ ကတောင်းကျိုက်၍ ဘောလုံးတစ်လုံးနှင့် အမှတ်တရ ရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အလွန်စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် ယင်း အကြောင်းအရာကို ရေးသားထားသော စာပိုဒ်ကို ကြိုးစား၍ ဖတ်ကြည့်မိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းမှု ကြောင့် ရေးသားထားသော အကြောင်းအရာ အစစ်အမှန်ကို သေချာစွာ မသိရှိသည့်အတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)သို့ ယင်းစာအုပ်အား ယူဆောင်သွားကာ အသင်းရှိ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များဖြစ်ကြသော မောင်အောင်ဟိန်းထွန်း၊ ဒေါ်ဧရာမောင်မောင်၊ ဒေါ်စိုးစန္ဒာတို့ကို အကူအညီ တောင်းရတော့သည်။ ဤတွင် စာရေးသူ Scott ၏ ရေးသားထားသော စာမူအား တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုကာ ယခုကဲ့သို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အား တင်ပြနိုင် ခြင်းဖြစ်တော့သည်။
Scott ၏ လက်ရေးစာမူ စာရွက်တွင် ၁၈၇၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကန်မည့် ဘောလုံးပွဲ တစ်ပွဲ အကြောင်းပါရှိသည်။ “ဒီနေ့ နေ့လည်မှာ Putsoes နှင့် Trousers တို့နှင့် ဘောလုံးပွဲရှိသည်။ ညနေ (၅း၀၀) နာရီမှာ ကန်မည်။” ယင်းအောက်တွင် J.G.Scott ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဟု လက်မှတ်ပါရှိသည်။
ဗမာလူငယ်များသည် ဘောလုံးကန်ခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့က “ဘောလုံး ကန်ရတာ တိုက်ခိုက်တာနဲ့ ဆင်တူတယ်။” ဟု ပြောကြသည်။ ခွင့်ယူထားသော ကျောင်းသားတစ်ယောက်၏ စာ တစ်စောင်တွင် ဘောလုံးကို သူတို့ မည်မျှစိတ်ဝင်စားကြောင်း သိနိုင်သည်။ အဆိုပါ ကျောင်းသားက သူသည် ကျောင်းကို ပြန်လာချင်ကြောင်း၊ သူပြန်မရောက်သေးခင် အချိန်အထိ ဘယ်ဘောလုံးပွဲမှ မကန်ပါစေနှင့် ဟု ဆုတောင်းနေကြောင်း စာထဲ ရေးထားသည်။ သူက ထပ်မံရေးသား ထားသေးသည်။ “မနေ့ညက အိပ်မက်ကောင်း တစ်ခုကို တစ်ခုကို မက်ခဲ့သေးသည်။ ကျွန်တော်က ဆရာကြီးတို့နဲ့ ဘောလုံးကန်နေတာပေါ့။ အဲဒါ နတ်ပြည်ရောက် နေတဲ့အတိုင်းပဲ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အခြားကျောင်းသားတစ်ယောက် ပြောသည်က “ကျွန်တော်တို့ ပြန်မရောက်ခင် ဆရာကြီးတို့ ဘောလုံးအသင်း အခြားဘယ်အသင်းနဲ့မှ မကန်ပါစေနဲ့လို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပါတယ်။ ဘောလုံးကန် တာ အလွန်ပျော်စရာကောင်းတယ်။” ထိုစကားကို ပြောသူမှာ “ဟယ်ရီ - ဖိုးမင်း” ဖြစ်သည်။ ဟယ်ရီ - ဖိုးမင်းသည် ဗမာကျောင်းသားဖြစ်သည်။ သူသည် နောက်ပိုင်းတွင် သူတို့အသင်း၏ ဂိုးသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဤကစားနည်း ဤပုံစံသည် (ဘောလုံးကစားခြင်းသည် လူဖြူတို့နှင့် အရှေ့တိုင်းသားတို့အကြား ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ရရှိစေရန်သာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအချက်သည်ပင် လူငယ်တွေကို သင်ပေးလိုသော အချက် ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ သင်ပေးရသည်မှာ လွယ်ကူသော အလုပ်မဟုတ်ပေ။ သူတို့က သင်ကြားလိုစိတ်တော့ ရှိသည်။ သို့သော် ၄င်းတို့ကို စနစ်တကျ ကစားတတ်ဖို့ သင်ပေးရန်မှာ ခက်ခဲသည်။
လူငယ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ဘယ်နေရာမှာ ကစားပါဟု တာဝန်ပေးစေကာမူ ထိုလူငယ်သည် ဘောလုံးနောက်ကိုသာ လိုက်နေတက်သည်။ ရှေ့တန်းတိုက်စစ် ကစားသူများကို နောက်တန်းလူများနှင့် ပူးတွဲ ကစားတက်ရန် သင်ပေးရသည်။ ရှေ့တန်းကစားသမားများ နောက်တန်းကို ပြန်ပြေးပြီး သူ့နောက်ခံ လူများနှင့် ထပ်မနေစေရန်လည်း သင်ပေးရသည်။ အကြိမ်တော်တော်များများပင် နောက်ခံလူတစ်ယောက်သည် အခြားရွေးစရာ မရှိပဲ သူ့အသင်းဘက်မှ ရှေ့တန်းလူကို ၀င်တိုက်ပြီး ဘောလုံးကို ဖျက်ထုတ်လိုက်လေ့ရှိသည်။
ဗမာလူမျိုးတွေသည် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ကစားနည်းဖြစ်သော ခြင်းလုံးနှင့် အကျွမ်းတ၀င်ရှိပြီးသား သူများဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၄င်းတို့သည် ခြေဗလာနှင့် ကန်တတ်ကြသူများဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုအချက်သည်ပင် အစ ပထမ၌ လူတိုင်းအတွက် အဓိက ပြဿနာဖြစ်နေခဲ့သည်။
Mr.Scott သည် ဘောလုံးကစားနည်းကို မြန်မာပြည်တွင် စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ခရိုင်မှာ ကစားခဲ့သော ပထမဆုံး ဘောလုံးပွဲအကြောင်းကိုပင် ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေသေးသည်။ ထိုအချိန်က သူ (Mr.Scott) သည် ကျောင်းအုပ်တာဝန်ယူခဲ့သော St.John ကောလိပ်နှင့် မော်လမြိုင်မှ ကျပန်းကစားသမား (၁၁) ယောက်နှင့် ကန်ခဲ့သော ကစားပွဲဖြစ်သည်။ ဘောလုံးပွဲ မစခင်မှပင် ဘောလုံးကွဲသွား၍ Scott နှင့် ယခု စာရေးသူတို့ သည် ဘောလုံးတစ်လုံး အမြန်ရရှိနိုင်ရန် မြို့ထဲရှိ သားသတ်ရုံများကို အနှံ့ပတ်ရှာခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘောလုံး ပြုလုပ်ဖို့ ဆီးအိတ်တစ်ခု ရရှိရန် တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကို ၀ယ်ယူပြီး ချက်ချင်းသတ်ဖြတ်၍ ထုတ်ယူရန် အထိပင် စဉ်းစားခဲ့သည်။ Scott တစ်ယောက် ထိုကွဲနေသော ဘောလုံးကိုကိုင်ကာ သားသတ်သမားကို မြန်မြန်လုပ်ဖို့ ပူညံ ပူညံလုပ်ခဲ့ပုံကို ဖော်ပြရာမှာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပင် စာဖွဲ့လောက်ပေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် တံငါသည် အချို့ထံမှ ဆီးအိတ် တစ်ခုကို ရရှိ၍ အဆိုပါ သမိုင်းဝင် ဘောလုံးပွဲကို ကစားခဲ့ရသည်။ အထက်ပါ အဖြစ်အပျက် အသေးစိတ်သည် ကျွန်တော် နံရိုးတစ်ချောင်း အကျိုးခံ၍ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ မှတ်တမ်းလေးအား စကော့တလန်နိုင်ငံသား Jame George Scott ၏ ဒိုင်ယာရီတွင် ရေးသားထားခဲ့ ပြီး ထိုဒိုင်ယာရီတွင် ပါသောအကြောင်းအရာများကို G.E MITTOIU (Lady Scott) က ပြန်လည်တည်းဖြတ်၍ ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာ ပထမအကြိမ် ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အဆိုပါ မှတ်တမ်းအရ ၁၈၇၉ ခုနှစ် ကတည်းကပင် မြန်မာပြည်၌ ဘောလုံးအားကစားကို စတင်ကစားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုသို့သော အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များအရ ဗမာ့ဘောလုံး သမိုင်းပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ ဗမာ့လူမျိုးတို့ ဘောလုံးအား စိတ်ဝင်စားပုံတို့ကို သိရှိရပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘောလုံးပွဲကြည့် ပရိတ်သတ်များ၊ ဘောလုံးရူးသွပ် သူများ၊ ဘောလုံးအသင်း ထူထောင်ထားသူများ၊ ဘောလုံးကစားသမားတို့သည် ဗမာ့ဘောလုံး ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ဗမာ့ ဘောလုံး ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ ဗမာပြည်သို့ ဘောလုံးကစားနည်း ရောက်ရှိလာပုံ၊ ဗမာ့ဘောလုံး စတင်ခဲ့သည့် ခုနှစ် သက္ကရာဇ်တို့အား သိထားသင့်ပါ၍ စေတနာ ရှေ့ထား၍ ကျွန်ုပ်တွင် ရှိနေသော အဖိုးတန်စာအုပ် စာပေများမှ ဤ ဗမာ့ဘောလုံး ဒိုင်ယာရီ ဆောင်းပါးအား တင်ပြ လိုက်ရပါတော့သည်။
(အနာဂတ်ကာလတွင် ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသော အဖိုးတန်ရှားပါး စာအုပ်၊ စာပေများမှ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး စသည် . . . သမိုင်းစစ် သမိုင်းမှန်များအား ပြည်သူလူထုအတွက် အစစ်အမှန်များကိုသာ ရွေးချယ်၍ အလျင်းသင့်သလို တင်ပြသွားပါမည်။)
ပေးပို့ပေးသော ကိုကျော်သူအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဆရာမကို စစ်အာဏာရှင် နအဖ တပ်မှ စစ်သားတဦး ကြံစည်၊ ကျောင်းသားများ မကျေနပ်
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်က ဆရာမ တဦးကို လုံခြုံရေးယူတဲ့ ခလရ ၄၇ က တပ်သားတဦးက ကြံစည်ခဲ့တဲ့အပေါ် ကျောင်း သားတွေက မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြဆဲပဲလို့ သိရပါတယ်။ ဗန်းမော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကို တာဝန်နဲ့ အသစ်ပြောင်းလာခါစ အသက် ၂ဝ ကျော် ကျူတာဆရာမတဦးကို တက္ကသိုလ်အနီး ခလရ ၄၇ က လုံခြုံရး တပ် သားတဦး အဓမ္မပြုဖို့ ကြံစည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ကျောင်းသားတဦးက ပြောပါတယ်။
ဖြစ်ပုံကတော့ အခုလ ၈ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီမှာ ဆရာမက ကျောင်းက ကွန်ပြူတာကို လာရောက် အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာသုံးနေစဉ် ရုတ် တရက် မီးပျက်သွားတာကြောင့် ရုတ်တရက်ပဲ ကျောင်းအနားရှိ သူ့ရဲ့အဆောင်ကို ချက်ခြင်း ထပြန်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆောင်ပြန်ရောက်ပြီး မကြာမီ ကွန်ပြူတာ မပိတ်မိလို့ စိတ်မချဘူး ဆိုပြီး ကျောင်းဝင်းထဲ ပြန်လာရာမှာ အခုလို ကြံစည်တာ ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို တကျောင်းလုံး သိသွားတဲ့အတွက် တပ်ရင်းမှူးကိုယ်တိုင် ကျောင်း အုပ်ကြီးဆီ လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်လို့ ကျောင်းသားတဦးက ပြောပါ တယ်။ အဲဒီနောက် အဖြစ်မှန်ကို အခုထိ ဖုံးဖိထားပြီး ဆရာမကိုလည်း ဒီအမှု ကျေအေးဖို့ အတင်း လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တာကြောင့် မကျေမနပ် ဖြစ်ရတယ်လို့ ကျောင်းသားတဦးက ရှင်းပြပါတယ်။ “ဆရာမက ကွန်ပြူတာခန်းထဲ ဝင်တဲ့အချိန်မှာ နောက်ကနေ ပါးစပ်ကို ပိတ် တယ်။ ပိတ်တဲ့ လက်ကို သွားနဲ့ကိုက်ပစ်တော့။
(သူက)နမ်းပြီးတော့ ဆရာမကို လည်ပင်းညှစ်တယ်။ ဆရာမကလည်း သူ့ကိုလည်ပင်း ပြန်ညှစ်တယ်။ အဲလို ရုန်း ရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပြီး ဆရာမက ထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့။ ဟိုလိုတော့ ဆရာမက ထိ ခိုက်နစ်နာမှု တစုံတရာ မရှိပါဘူး။ “ကျောင်းနဲ့ ခလရ ၄၇ က လေးဖာလုံလောက်ပဲ ဝေးတာ။ သိပ်တော့ မဝေး ဘူးပေါ့နော်။
ပြီးတော့ သူတို့တွေကပဲ အဲဒီအချိန်မှာ လုံခြုံရေးက ရှိနေကြတယ်။ ဘာ ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၇ ရက်နေ့က ဗိုလ်ချုပ်သာအေး ကျနော်တို့ ကျောင်းကို လာဖို့ အစီအစဉ် ရှိတယ်လေ။ မလာဖြစ်တာလည်း ပါတာပေါ့။ “အားလုံး ဝိုင်းပြီး စုံစမ်းတဲ့အခါ ခလရ ၄၇ က ဆိုတာ သိတယ်လေ။ သိ တော့ နောက်တနေ့မှာပဲ ခလရ ၄၇ က ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးဝင်းကနေ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းအုပ် ဒေါက်တာသန်းနိုင်ဦးကို လာပြီးညိ‡တယ်။ နောက်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ် မသိပါဘူး။
ဆရာမက မကျေမနပ်နဲ့ လက်မှတ် ထိုးပေးလိုက် ရတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေက လုံးဝ မကျေနပ်ဘူး။” အရဆကသအးမ္မပြုဖို့ကြံစည်တဲ့ အဲဒီတပ်သားကိုလည်း အရေးမယူတဲ့အတွက် ကျောင်း သားတွေက ပိုပြီးမကျေမနပ် ဖြစ်နေကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။ မနှစ်ကလည်း ဆရာမ တွေနေတဲ့ အဆောင်ထဲကို တပ်သားတဦး ဝင်ရောက်ခဲ့ဖူးပြီး၊ ဒီလိုပဲ သတင်းအ မှောင်ချထားတယ်လို့ ကျောင်းသားတဦးက ပြောပါတယ်။ သူတို့ကို အရေးမယူရင် ပိုပြီး အတင့်ရဲလာလိမ့်မယ်လို့ ကျောင်းသားတွေက ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာသန်းနိုင်ဦးကလည်း ကျောင်းသား တွေအနေနဲ့ မကျေနပ်ရင် တဦးချင်းစီရုံးခန်းကို လာရောက် ပြောဆိုနိုင်တယ်လို့ ပြောကြောင်း အဲဒီကျောင်းသားက ပြောပါတယ်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဗန်းမော်ဟာ ခလရ ၄၇ အနီး ခိုကျင်ရွာမှာ တည် ရှိပြီး၊ ကျောင်းသူကျောင်းသား ၂ဝဝ ကျော် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
﻿"ယဉ်ကျေးသော ဖားအံ ပယက ဥက္ကဌ "
အယ်ဒီတာမှတဆင့် သက်ဆိုင်သူသို့ -
( ၂၁-၇-၂၀၁၀ )ရက်နေ့က ကမတ်မောင်း ( မြိုင်ကြီးငူတဖက်ကမ်း) ဈေး မီးလောင်မှုကို ကရင်ပြည်နယ် ပယကဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်း သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း။ အဆိုပါဈေးမှ တာဝန်ရှိသူ စည်ပင်အမှုဆောင် အရာရှိကို မီးလောင်မှုအား ပေါ့ဆသည့်အတွက် ယဉ်ကျေးစွာ ပါးရိုက်ဆုံးမခဲ့ကြောင်း။ လွန်ခဲ့သော (၃)လခန့်ကလည်း စည်ပင်အမှုဆောင်အရာရှိကို ဖားအံမြို့ ရေပေးဝေရေးကိစ္စဖြင့် ပါးရိုက်ခြင်း၊ ထိုးကြိတ်ခြင်းဖြင့် ဆုံးမခဲ့ကြောင်း။ သို့ သော်လည်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းသည် သူ၏လက်အောက် ၀န်ထမ်းဖြစ်သည့် ခယကဥက္ကဌများ၊ မယကဥက္ကဌများကိုတော့ အလွန်အလိုလိုက်သည်။
ကမတ်မောင်းဗလီအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မြ၀တီမြို့ ဗလီအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း နှင့် ပြည်သူလူထု သွားလာနေသော လမ်းမြေများအား ရောင်းစားနေမှု၊ သူများမြေကို အာဏာဖြင့် ကလိမ်ကကျစ်ကျစွာ ရောင်းစားနေမှုတို့ကို လျစ်လျူရှုခဲ့သည်ဟု သူ၏ပယက ရုံးဝန်ထမ်းများထံမှ သိရှိရသည်။
ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ သွားရာတွင် သူအုပ်ချုပ်နေသော ၀န်ထမ်းများအပေါ် ပါးရိုက်ခြင်း၊ ထိုးကြိတ်ခြင်းတို့ ဖြင့် အုပ်ချုပ်တတ်သည့် သူ၏အကျင့်များသည် အလွန်ယဉ်ကျေးပါသည်ဟု သူ၏၀န်ထမ်းများမှ ပြောဆိုကြောင်းကြားသိရသည်။
"အယ်ဒီတာမှတဆင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် အမြတ်ကြီးစားဝန်ထမ်းများသို့ "
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းဇော်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ဆန်းပိုင်းက ရတနာပုံတယ်လီပို့ ဖွင့်ပွဲတွင် ပြောဆိုချက်အရ 'တယ်လီဖုန်းနောက် လူလိုက်စရာမလိုဘဲ၊ ပြည်သူလူထုနောက်သို့ တယ်လီဖုန်းလိုက်မှာဖြစ်ကြောင်း'ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ပြည်နယ်/တိုင်းမန်နေဂျာများသည် စီဒီအမ်အေ၊ ဂျီအက်စ်အမ်နှင့် လိုင်းဖုန်းများကို အသုံးလိုသော ပြည်သူလူထုလက်တွင်းသို့ မချဘဲ ၊ ကိုယ်ပိုင်အမြတ်ကြီးစားယူကာ ရာထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးချကာ ရောင်းစားနေမှုကြောင့် အလွန်ချမ်းသာသော သူဌေးကြီး ၀န်ထမ်းများဖြစ်နေကြသည်။ ဘယ်သူကိုမှလည်း လူမထင်သလို ၊ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းကို အခိုင်းအစေလို သဘောထားနေခဲ့သည်။။ဘယ်သူကိုမှလည်းလူမထင်သလို အောက်ခြေ၀န်ထမ်းကို အခိုင်းအစေလို သဘောထားနေခဲ့သည်။
အလွန်ဆိုးသည်မှာ ကရင်ပြည်နယ် မန်နေဂျာ ဦးသန်းလွင် ဖြစ်သည်။ အစိုးရဈေး (၁၅.၅)သိန်းကျပ်တန် စီဒီအမ်အေ ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းကို ကျပ်(၁၈)သိန်းဖြင့် လိုသလောက် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ လိုကယ် စီဒီအမ်အေ (၅.၅)သိန်းကျပ်တန်ကို (၆. ၅)သိန်းကျပ်ဖြင့် အမြတ်ကြီးစား ရောင်းချပေးသည်။ စီဒီအမ်အေ၊ ဂျီအက်စ်အမ်ကဒ်များ ပျောက်လို့ ပြန်လျှောက်လျှင် အစိုးရဘဏ်မှာ ကျပ်တစ်သိန်းသာသွင်းပြီး၊ မန်နေဂျာ၏ ဘဏ်စာအုပ်တွင် ကျပ်ငါးသောင်းသွင်းရသည်။ ယခင်ကတော့ ဖုန်းလိုလျှင် အာဏာပိုင်တွေက လျှောက်လွှာခေါ်..မဲနှိုက်စနစ် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ယခုနောက်ပိုင်း ရွေးကောက်ပွဲနီးတဲ့အခါ သူ့ကိုပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်သဖြင့် အစိုးရပစ္စည်းကို ကိုယ်ပိုင်သဖွယ် အမြတ်ယူရောင်းချနေလျှက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် တယ်လီဖုန်းပြောရွှေ့လိုပါက နေရာပြောင်းရွှေ့ခ ကျပ်(၃)သိန်းပေးရသည်။ ဦးသန်းလွင်သည် ငွေရှာသည့်အခါ သူ့မိန်းမ သွန်သင်စရာမလိုအောင် အလွန်ရှာဖွေတတ်သည်ဟု သူ့ပြည်နယ်ရုံးမှ ၀န်ထမ်းများက ပြောကြသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, July 23, 2010 Links to this post
အခွန်တံဆိပ်မရှိသော အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက်များ သိမ်းဆည်း
အခွန်တံဆိပ်ကပ်ထားခြင်းမရှိသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပထုတ် အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက်များကို သက်ဆိုင်ရာက ဇူလိုင် ၁ရက်မှစ၍ လိုက်လံစစ်ဆေးပြီး တွေ့ရှိပါက စတင်သိမ်းဆည်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဆိုသည်။ အခွန်မဆောင်ဘဲ ရောင်းချပါက နိုင်ငံခြားထုတ် စီးကရက်ကို လုံးဝဖျက်ဆီးမည်ဖြစ်ပြီး အရက်အမျိုးမျိုးကိုမူ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းကာ လေလံတင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လေလံဆွဲလိုသူက အကောက်ခွန်ဥပဒေအရ အခွန်ဆောင်ပြီး ပြန်လည်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။ ပြည်တွင်းထုတ် ပစ္စည်းများမှာမူ အခွန်တံဆိပ်ကပ်၊ အခွန်ဆောင်ပြီး ပြန်လည်ရယူနိုင်ကြောင်း ပြောသည်။ နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းလာသော ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်အခွန်နှုန်းများအတိုင်း ကောက်ခံ၍ အခွန်တံဆိပ်ကပ်ပေးခြင်းကို ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ကတည်းက စတင်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းထုတ်ပစ္စည်းများမှာမူ ၂၀၀၇ခုနှစ်ကတည်းက အခွန်တံဆိပ်ကပ်ပြီးမှ ရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း မြန်မာတိုင်း(မ်)ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ပွဲရုံဝင်း ယာဉ်ဝင်ခ ဂိတ်ကြေး ကောက်ခံသူများအနေဖြင့် ယဉ်ကျေးစွာ ငွေကောက်ခံသင့်
ဘုရင့် နောင်ပွဲရုံဂိတ်ဝ များရှိ တရား ဝင်ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံ သူများ အနေဖြင့် ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံ ရာတွင် ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့စွာ ကောက် ခံသင့် ကြောင်း ပွဲရုံဝင်းအ တွင်း နေထိုင်သူများက ဆို သည်။ပွဲရုံ ဂိတ်ဝမှာ ယာဉ် ဝင်ခ ကောက်ခံနေ တဲ့သူ အချို့က ပြေပြေ လည်လည် ကောက်ခံ တယ်။ အချို့က မချေမငံပြောဆိုတာ တွေရှိ တယ်။ ပွဲရုံပြင်ပကလာတဲ့ ကားနဲ့ တစ်တန်အထက် ကုန်တင် ယာဉ်တွေကိုသာ ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံခွင့်ရှိ တာပါ။
ပွဲရုံဝင်းထဲမှာနေတဲ့ တစ်တန်အောက်ကိုယ်ပိုင် ယာဉ်ငယ်တွေကို ယာဉ် ဝင်ခကောက်ခံခွင့်မရှိဘူး။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာက ပွဲ ရုံဝင်းအတွင်း နေထိုင်သူ တွေရဲ့ကား ပွဲရုံထဲဝင်ရင် အချို့ ယာဉ်ဝင်ခကောက် ခံသူတွေက ရန်စကားပြော တာမျိုး ရှိတယ်။ မကျေ နပ်လို့ ပြန်ပြောတော့ စကားများရန်ဖြစ်ပြီး ခြေ ပါလက်ပါ ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ပွဲရုံဝင်းကားဂိတ် မှာ ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံ သူတွေအနေနဲ့ ယဉ်ကျေး စွာနဲ့ ယာဉ်ဝင်ခကောက် ခံသင့်ပါတယ် ဟု ဘုရင့် နောင်ပွဲရုံဝင်းအတွင်းရှိ စိန် ပန်းလမ်းမှ လမ်းလူကြီးတစ် ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘုရင့်နောင်ဈေး ပွဲ ရုံသည် ရန်ကုန်မြို့၏အချက် အချာကျသော ကုန်စည် ဖြန့်ဖြူးရာနေရာကြီး ဖြစ် သည်။ ပွဲရုံဝင်းအတွင်းရှိကုန် စည်ဒိုင်သည်လည်း ပဲမျိုးစုံ ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံဆီကုန်သည်ကြီးများ အသင်း တည်ရှိရာနေရာ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နေရာဒေသ သို့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ကုန်ကားများ၊ ကိုယ်ပိုင် ယာဉ်များ၊ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးလူကောင်းများလည်း ဝင်ရောက်ကြသောကြောင့် မ .ထ .သ မှ ယာဉ်မောင်း နှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်များ ကို ယဉ်ကျေးပျူငှာစေရန် သင်တန်းပေးသကဲ့သို့၊ ပွဲရုံ ဂိတ်ဝများရှိ ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံသူများကိုလည်း သင်တန်းများပေးပြီးမှ ငွေ ကြေးကောက်ခံစေလျှင် အ ဆင်ပြေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပွဲရုံပိုင်ရှင်အများစုက သုံး သပ်ပြောကြားသည်။
စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် အာဇာနည် ဒီးဒုတ်ဦးဘချို
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အနုပညာ နယ်ပယ်ကနေ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေး အတွက် နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်ထဲ ရောက်ရှိ တာဝန်ယူခဲ့သူတွေ အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီလို အနုပညာရှင်တွေ အကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင် အာဇာနည် တဦးဖြစ်တဲ့ ဒီးဒုတ် ဦးဘချိုကို ချန်လှပ်ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီးဒုတ် ဂျာနယ်ကို ဦးစီး ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ အတွက် ဒီးဒုတ် ဦးဘချိုလို့ အမည်တွင်ခဲ့တဲ့ ဆရာ ဦးဘချိုဟာ စာရေးဆရာ အဖြစ်သာ မဟုတ်ဘဲ အနုပညာမျိုးစုံ ဖန်တီးနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာရေးဆရာ သိန်းဖေမြင့်က "ဆရာ့အတွက် စွယ်စုံဆိုတဲ့ စကားနဲ့တောင် မလုံလောက်ဘူး" လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာ သင်္ခါကလည်း "အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး ဒီးဒုတ် ဦးဘချို" ဆိုတဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်မှာ ဦးသန့်ရဲ့ ဆရာ့အပေါ် အမြင်ကို အခုလို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
"စစ်ကြိုခေတ်က ကြီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်းတွင် ဆရာ့ အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာအုပ်တိုင်း မလွတ်အောင် စာဖတ် အလွန်များခဲ့သူဟု ကျော်ကြားခဲ့သော ဦးသန့် (ယခု ကွယ်လွန်သူ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း) က 'အင်္ဂလိပ် လူမျိုးများထဲတွင် အဲ့လ်ဒစ်ဟတ်စလေ ဆိုသူ ပုဂ္ဂိုလ် တယောက် ရှိသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဘယ်ဘက်က စမ်းစမ်း ရသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် ဒီးဒုတ် ဦးဘချိုလောက် ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ စုံမည် မထင်ကြောင်း' ဟူ၍ပင် ဝေဖန် ရေးသားထားခဲ့သည်။ မှန်ပေလိမ့်မည်"
ဆရာ ဦးဘချိုဟာ စာပေဘက်မှာ ဆိုရင် ဆောင်းပါး ဝတ္ထု စတဲ့ စကားပြေမျိုးစုံကို ရေးသားနိုင်သလို ကဗျာ မျိုးစုံကိုလည်း ရေးဖွဲ့နိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ပမာဒ လေခ ဖြစ်ပြီး အရေးအသား ချွတ်ယွင်း သွားတာကိုတောင် ထောက်ပြပေးခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ဦးစီး ထုတ်ဝေတဲ့ ဒီးဒုတ် ဂျာနယ်မှာ ကလောင်မျိုးစုံ စာမျိုးစုံ ရေးခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းရေးခန်း တခုမှာ လုပ်ကြံမှု အကြောင်းကို ကြိုတင် နိမိတ်ဖတ် ရေးသားခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂျပန်တွေ မြန်မာပြည်ထဲကို မဝင်ရောက်ခင် ကတည်းက ဂျပန်တွေရဲ့ ဖက်ဆစ် ဝါဒကို ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဂျပန်တွေ ဝင်လာတဲ့ အခါ သူ့ကို သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားတာ ခံခဲ့ရပြီး တပည့်တွေက အကာအကွယ် ပေးခဲ့လို့ လွတ်မြောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရွှေဘိုမြို့ အနီးမှာရှိတဲ့ ဆိပ်ခွန်ရွာမှာ ဆရာ့ကို သွားတွေ့ရပြီး ဂျပန်တွေရဲ့ဘေးက ကယ်တင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက ရေးသားဖူးပါတယ်။ ဒါက ဆရာ့ရဲ့ ကလောင်လက်နက် ဘယ်လောက် ထက်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို မှန်းဆနိုင်တဲ့ အချက်ပါ။
ရန်ကုန်မြို့နဲ့ ဝေးလံတဲ့ တောရွာတွေကနေ "ဒီးဒုတ် ရန်ကုန်" ဆိုပြီး ဘာလိပ်စာမှ အတိအကျ မရေးဘဲ ထည့်လိုက်တဲ့ စာတွေကိုတောင် စာပို့သမားတွေက ဆရာ့ဆီ ရောက်အောင် ပို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကလည်း ဆရာ့ရဲ့ ဒီးဒုတ်ဂျာနယ် ဘယ်လောက်ထိ သြဇာသက်ရောက်မှု ကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ခါနီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတော် စာရေး ဆရာများ အသင်းကြီးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီလို စာပေဘက်မှာ ထူးချွန်ပြီး သြဇာရှိတဲ့ ဆရာဟာ ဆေးကျမ်း၊ အဂ္ဂိရတ်၊ ဗေဒင်နက္ခတ်၊ ရာဇဝင်သမိုင်း၊ လောကဓာတ် ပညာရပ်တွေကို နိုင်နင်းသလို ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၊ ပန်းချီပညာ၊ ဓာတ်ပုံပညာတွေကိုလည်း နားလည်သူ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂီတနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကိုယ်တိုင်က စောင်းကောက်ကိုသာ တီးတတ်ပေမဲ့ ဘယ်တူရိယာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို မဆို ရှင်းပြနိုင်ပြီး မြန်မာ့ ဂီတကိုတောင် ခေတ်မီနည်းတွေနဲ့ ပြန့်ပွားအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ဆရာ သိန်းဖေမြင့်က ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ထုတ် ဂျာနယ်ကျော်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို အနုပညာရှင် တဦး ဖြစ်တဲ့ ဆရာ ဦးဘချိုဟာ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းတဲ့အခါ ရာထူးမမက်၊ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ ပါဝင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ ကျောင်းသားသပိတ် ပေါ်ပေါက်ပြီး အမျိုးသား တက္ကသိုလ် ထူထောင်တဲ့ အခါ ဆရာ ဦးဘချိုက ထူထောင်သူ တဦး အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ပေါင်းတည်နဲ့ ဟင်္သာတမြို့တို့မှာ ကျောင်းဆရာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဟာ လူတိုင်း အပေါ် စေတနာ ကောင်းပြီး အပေးအကမ်း ရက်ရောသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၂၇ - ၂၈ လောက်မှာ ဒီးဒုတ် ဂျာနယ်ကနေ တလကို ငွေ ၃,၀၀၀ ကျော်လောက် ဝင်ငွေ ရှိတာတောင် သူတပါးကို ပေးကမ်းမှုတွေကြောင့် ဘယ်တော့မှ ကေ့းမကင်းပါဘူး။ နောက်ဆုံး ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာတောင် ချောင်ချောင်လည်လည် မရှိဘူးလို့ ဆရာ သိန်းဖေမြင့်က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို စိတ်ထားကောင်းလို့လည်း လူငယ် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေက လေးစား ကြည်ညိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကလည်း ဆရာ ဦးဘချိုကို လေးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်အပြီးမှာ ပြန်လည် ထုတ်ဝေတဲ့ ဒီးဒုတ်ဂျာနယ်အတွက် အမှာစာမှာ အခုလို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
"ဒီးဒုတ်ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးဘချိုမှာ ဝါရင့်သော ဝံသာနု တဦးပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုမျှမက သူ၏ အယူအဆ ထင်မြင်ချက်များကို သဘောမတူသူများ ရှိပင် ရှိလင့်ကစား သူ့ကို အာဏာလု သို့မဟုတ် ဝမ်းစာလု သို့မဟုတ် ရာထူးလု ဝံသာနုဟု မည်သူမျှ မစွပ်စွဲနိုင်ပေ။
ကျွန်တော်သည် ဆရာ ဦးဘချိုနှင့် ၁၉၃၆ ကျောင်းသား သပိတ်နှစ်လောက်က ကောင်းစွာ သိကျွမ်းခဲ့ရာ သူ၏ ဉာဏ်ရည် ဖန်ရည်နှင့်တကွ စိတ်ထားကို ကောင်းစွာ သိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့နှင့် ဆရာ ဦးဘချို ယခု ဖဆပလခေတ်တွင်မှ နိုင်ငံရေးအားဖြင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပေါင်းလာ ခဲ့ကြသော်လည်း ၁၉၃၆ ခု၊ သပိတ်လောက်တုန်းကပင် စ၍ အရေးရှိလျှင် ရှိသလို ဆရာ ဦးဘချို၏ ထိရောက်သော အကူအညီများ ရရှိခဲ့ပေသည်။"
ဒီအမှာစာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေး ဝင်လုပ်နေတဲ့ စာရေးဆရာ အတွက် နိုင်ငံရေးသမားက စာရေး ပေးထားတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဘယ်ဟာမှ သီးခြား ရှိမနေဘဲ တနည်းတဖုံ ဆက်စပ်နေတတ်တဲ့ သဘောတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းဟာ ဒီးဒုတ် ဂျာနယ်အတွက် အဲဒီ အမှာစာကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ရေးသားခဲ့တာပါ။ ဒီအမှာစာ ရေးပြီးလို့ နောက်ထပ် ၁ နှစ်နဲ့ ၈ ရက် အကြာမှာတော့ ဆရာတို့ ၂ ဦးစလုံး လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် သူတို့ ကွယ်လွန်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့လည်း စနစ်တကျ အချိန်ယူပြီး ဝိုင်းဝန်း ပြုစုထားတဲ့ "ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ" စာအုပ်ကြီး တအုပ် မယ်မယ်ရရ မပေါ်ထွက် လာသေးသလို စာပေါင်းများစွာ ကဗျာပေါင်းများစွာ ရေးသားခဲ့တဲ့ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုရဲ့ စာပေါင်းချုပ်လည်း မထွက်လာသေးပါဘူး။ ဒါက တိုင်းပြည်အတွက် ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့ အနေအထားပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စာပေ အနုပညာရှင်တွေက နိုင်ငံ့ အကျိုးအတွက် ဆိုရင် နိုင်ငံရေး တာဝန်တွေကိုလည်း ထမ်းဆောင် သင့်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဆရာ ဦးဘချိုက ပြသခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးဟာ နိုင်ငံရေး၊ တခြား ဘာရေး ညာရေးတွေနဲ့ ရောယှက်လို့ မရဘူး ဆိုတဲ့ သဘောတရားတွေသာ မှန်ခဲ့မယ်၊ အားလုံးကလည်း အဲဒီအတိုင်း လိုက်နာ ကျင့်သုံးခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်ဟာ အင်္ဂလိပ် လက်အောက် ဒါမှမဟုတ် ဂျပန် လက်အောက်ကနေ ဒီကနေ့ထိ လွတ်မြောက်မှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ယူဆမိကြောင်းပါ။
(၉၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈)
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ နော်ဝေ အခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့ အသံ (ဒီဗွီဘီ) က ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ထိန်လင်းရဲ့ "စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် အာဇာနည် ဒီးဒုတ် ဦးဘချို" ဆောင်းပါးကို မိုးမခ ကွန်ရက် စာမျက်နှာ (၂၀၀၈ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့) ကနေ ပြန်လည် ကူးယူ လွှင့်တင် ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, July 22, 2010 Links to this post
တနင်္သာရီတိုင်းတွင် အကြီးဆုံးတည်ဆောက်နေသော ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်ကို ၂၀၁၂ တွင် ဖွင့်မည်
ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် KR Commercial and Property ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းခွဲ Pearl Lagura အပန်းဖြေလုပ်ငန်းသည် တနင်္သာရီတိုင်းတွင် အကြီးဆုံးကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်ကို တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းအင်တာနက်သတင်း တစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယင်း ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅သန်း ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး အပန်းဖြေဟိုတယ်ကို အပိုင်းလိုက်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း အခန်း ၆၀ခန့်ကို ပထမဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကာ ဒုတိယအဆင့် အခန်း ၄၀ကို ဆက်လက်ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး လာမည့်နှစ်တွင် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းသတင်းတွင် ပါရှိသည်။ အဆိုပါ အပန်းဖြေဟိုတယ်တွင် Standard Suite နှင့် Superior Suite အခန်းသုံးမျိုး ပါဝင်ပြီး ညီလာခံခန်းမ၊ အစည်းအဝေးခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ရေကူးကန်၊ အားကစားခန်းမ၊ ဈေးဝယ်စင်တာနှင့် အခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်များ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းPopular News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ပြည်တွင်း ၊ပြည်ပ အများပြည်သူလူထုအလှူရှင်အပေါင်းကျေကျေနပ်နပ်ဝမ်းသာအားရ.. သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်
အောင်ပြီလားဟေ့ . . . အောင်ပြီဟေ့
၁၉.၇.၂၀၁၀ (အာဇာနည်နေ့)တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ခ) ရွှေဇီးကွက်၊ အသင်းသူ/ သားများမှ ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်မြို့၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ ပုတီးကုန်းတိုက်နယ် အတွင်းရှိ ဇီးကုန်းလေး ကျေးရွာ၊ သက္ကယ်ချင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်ရှိ မကျည်းစုကျေးရွာနှင့် ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင် ကျောင်းတိုက်တို့တွင် အများပြည်သူတို့အား သောက်သုံးရေ ရရှိရေးအတွက် အ၀ီစိတွင်း တူးဖော်ခြင်း နှင့် အုတ်ရေကန်များ တည်ဆောက်လှူဒါန်းခြင်း အစုစုတို့အတွက် စက်ရေတွင်းများအပ်နှံ လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ သွားရောက်ပြီး အောင်မြင်စွာဖြင့် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် နမောတဿ (၃) ကြိမ် ရွတ်ဆို၍ အခမ်းအနားအား စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီးနောက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူမှ သောက်သုံးရေ ရရှိရေးအတွက် အ၀ီစိတွင်း တူးဖော်ပေးခြင်း၊ အုတ်ရေကန်များ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်း ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားကာ သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအသီးသီးတို့မှ ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ဦးဆီမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားပြီးနောက် ဖဲကြိုးဖြတ်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လှူဒါန်းမှု အစုစုတို့အတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပ အလှူရှင်များကိုယ်စား ရေစက်သွန်းချ မေတ္တာပို့သ အမျှပေးဝေ၍ ဗုဒ္ဓ သာသနံ စိရံတိတတ္ထု (၃) ကြိမ်ရွတ်ဆို၍ အခမ်းအနားအား အောင်မြင်စွာဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ထို့သို့ သွားရောက်ရာတွင် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် သွားလာရန် ခက်ခဲသော ဇီးကုန်းလေးနှင့် သက္ကယ်ချင်းကုန်းကျေးရွာများသို့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်ကာ ရပ်မိရပ်ဖတို့နှင့် တွေ့ဆုံကြပြီး အခမ်းအနားကို ကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်။ ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင်ကျောင်းဝင်း အတွင်းရှိ ရေအလှူပွဲသည် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မွေးနေ့ သက်တော် (၆၀) ပြည့်နေ့၊ ရွှေပေါက်ပင်ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ ရွှေရန်ပြေဘုရားအား ကြာသင်္ကန်းယက်လုပ် ပူဇော်သော နေ့၊ မေတ္တာပန်းကုံး သီကုံး၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဒေ၀တာနတ်မင်းအပေါင်းမှ တစ်ဆင့် ဆက်ကပ် ပူဇော်ခြင်း၊ သစ်သီးဆွမ်း ကပ်လှူပူဇော်ခြင်း စသည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများနှင့်အတူ ရေတွင်း ရေကန်များ လှူဒါန်းခြင်း ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေခဲ့ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ရေအလှူ ကုသိုလ်တော်ပွဲကြီးသည် ပြည်မြို့တ၀ှိက်တွင် အခက်အခဲမျိုးစုံကြားမှ အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်ပါ၍ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အများပြည်သူ အလှူရှင်များအနေနှင့် သာဓု အနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုနိုင်တော့ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် “အောင်ပြီလားဟေ့ … အောင်ပြီဟေ့” ဟု ဟစ်ကြွေး လိုက်ရပါတော့သည်။
ပြည်တွင်း ပြည်ပ အလှူရှင်များ၏ ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော် ထုတ်ပေးရာတွင် မြန်မာလူမျိုး အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီ ဖေးမခဲ့သော ပြည်မြို့ ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့ ကိုညီညီအောင်နှင့် ကိုမိုးကြီးတို့ အဖွဲ့သူ/သားများနှင့် ပုတီးကုန်းမြို့နယ် လူငယ့်အားမာန် ပရဟိတလူငယ် အဖွဲ့သူ/ သားများ၊ နယ်ခံ ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း နှလုံးသားထဲမှ မှတ်တမ်းတင် အပ်ပါသည်။
ထောင်ဆိုတာကတော့ လူ့ပြည်က အပယ်ဘုံ တဘုံပါပဲ ( ဦးဝင်းထိန် )
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပတ်အွီချွန်းကို အစည်းအဝေးတခုတွင် တွေ့ရပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ပတ်အွီချွန်း (Pak Ui Chun) ဟာ လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့ကနေ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ထိ မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ခရီး သွားရောက်မယ်လို့ အာဆီယံ သံတမန် သတင်းရပ်ကွက်က ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံပိုင် ဗဟိုသတင်းဌာနကလည်း ထုတ်ဖော် ရေးသားထားပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ အာရှ ၄ နိုင်ငံခရီးစဉ်အဖြစ် ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လာအို နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတို့ကို သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတဦး မြန်မာနိုင်ငံကို အခုလို တရားဝင်သွားမဲ့ ကိစ္စဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့ အာဇာနည်ကုန်းမှာ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ချွန်ဒူးဝမ်ကို မြောက်ကိုရီးယား ကွန်မန်ဒိုတွေ လုပ်ကြံ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင် အကြီးအကဲ အိန္ဒိယခရီးစဉ် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ဝေဖန်
သင်္ဘောပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပျောက်ဆုံးမြန်မာသင်္ဘောသားကို ရှာဖွေမှု ရပ်ဆိုင်း
ယခုလ ၁၂ရက်က တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ဖြစ်ပွား သော Eastern Honesty သင်္ဘော ပေါက် ကွဲမှုကြောင့် ပျောက်ဆုံးခဲ့ရသည့် မြန်မာ သင်္ဘောသားတစ်ဦးအားရှာဖွေမှုကို ဇူလိုင် ၁၅ရက်မှစ၍ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပျောက်ဆုံးနေသည့် သင်္ဘော သားမှာ ကိုဝေဖြိုးစံအမည်ရှိ အသက်(၂၃) နှစ်ခန့်အရွယ် ကုန်းပတ်သင်္ဘောသားတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းပျောက်ဆုံးသင်္ဘောသား အား အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၁၂ရက် မှစ၍ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် ကုမ္ပ ဏီမှတာဝန်ရှိသူများက အဆက်မပြတ်ရှာ ဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရှာဖွေမတွေ့ခဲ့ရသဖြင့် ပျောက်ဆုံးအနေဖြင့်သာ ရှာဖွေမှုများကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
''ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေမှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါပြီ။ ပျောက်ဆုံးတာ ပြန် မတွေ့ဘူးဆိုတော့ အာမခံထားထားတဲ့ P & I က သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်တစ်ခု ရောက်ရင် ထိုက်တန်တဲ့လျော်ကြေးပေး အပ်သွားမှာပါ။ အခုပျောက်ဆုံးသင်္ဘော သားရဲ့မိသားစုတွေက မုံရွာမှာ ရှိနေပါတယ်။ အကျိုးအကြောင်းတွေကို အကြောင်းကြား ထားပြီးပါပြီ။ သေဆုံးဆိုတာက အလောင်း ပြန်တွေ့ရင် သတ်မှတ်တာမို့ အခုကလုံးဝ ကို ပြန်မတွေတဲ့အတွက် သုံးလ သို့မဟုတ် တစ်နှစ် စသည်ဖြင့် အချိန်ကာလတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ် ပါတယ်''ဟုအဆိုပါသင်္ဘောပေါ်သို့ မြန်မာ သင်္ဘောသား ၂၂ ဦးအား ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ သော Myanmar Ocean Win Services Co.,Ltd မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
လုံးဝရှာမတွေ့တော့၍ သေဆုံး သူအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါက မိသားစု ထံသို့ မြန်မာနိုင်ငံ SECD အရ အနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ခန့် ပေးအပ် သွားရမည်ဖြစ်ကာ ဒဏ်ရာရသူများကိုလည်း စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ရောဂါအပြီးပြတ်ပျောက် ကင်းသည်အထိ ကုသပေးမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါEastern Honesty သင်္ဘောမှာ မြန်မာသင်္ဘောသားများသာ ပါဝင်သော သင်္ဘောဖြစ်ကာ ယင်းသင်္ဘော မှာ ဗီယက်နမ်တွင် ကုန်ချပြီးနောက် မလေး ရှားနိုင်ငံ Kuantan ဆိပ်ကမ်းသို့ ကုန်တင် ရန်အသွား ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ သင်္ဘောသား ကိုဝေဖြိုးစံပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး သင်္ဘောသားနှစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ဒဏ် ရာရသူနှစ်ဦးမှာ စင်ကာပူရှိ SGH ဆေးရုံကြီး တွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေကြောင်းသိရသည်။
ရန်ကုန်ရှိ ဈေးကြီးအချို့ ကြွက်နှိမ်နင်းရေး ယခင်ထက် ပိုမိုကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်လာ
နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိဒေသအချို့၌ ကြွက်များသောင်းကျန်း နေကြခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိဈေးကြီးအချို့တွင် ကြွက်နှိမ်နင်း ရေးကို ယခင်နှစ်များထက်ပိုမိုကြပ်မတ်၍ လုပ်ဆောင်လာကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိဈေးကြီးများ၌ ကြွက်များအား သုတ်သင်ရှင်းလင်း ရန် ကမ်းနားဈေးတွင် အထူးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၂၄)နာရီ ဈေးကြီးဖြစ်သည့်သီရိမင်္ဂလာဈေးတွင်လည်း အလားတူလုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ဈေးကွဲတဲ့အချိန်မှာ ဈေးသန့်ရှင်းရေးကို ပုံမှန်လုပ်တယ်။ ဈေးသည်တွေအနေနဲ့လဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို သတ် မှတ်ထား တဲ့နေရာမှာ စွန့် ပစ်ရ တယ်။ ကြွက်တွင်းတွေမရှိအောင်လဲ နှိုးဆော်ထားတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ခါ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဌာနကည၈နာရီလောက်မှာလာပြီးကြွက်နှိမ်နင်းရေးကိုလာရောက်လုပ်ဆောင်
ပေးတယ်။ ဈေး အတွင်းမှာလဲ ပိုးမွှားမပေါက်ပွားနိုင်အောင် ZAGRO ပိုးသတ် ဆေးကိုဖျန်းတယ်။ ဒီနှစ်မှာ သန့်ရှင်းရေးတွေကို အရင်နှစ်တွေ ထက် ပိုပြီးလုပ်ဆောင်တယ်''ဟု ကမ်းနားဈေးမှ ဒုဈေးတာဝန်ခံဦး ဇော်မြင့်က ပြောသည်။
သီရိမင်္ဂလာဈေး၊ ဈေးသာယာရေးရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးစိန်စိုးက လည်း ''အရင်ကတော့သန့်ရှင်းရေးကိုပဲလုပ်တယ်။ ဒီနှစ်တော့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ပေါင်းပြီး ဇူလိုင် လထဲမှာပဲ ဈေးအတွင်း ကြွက်၊ ခြင်၊ ယင်များကို ပုံမှန်နှိမ်နင်းသွား မယ်။ ဒီနှစ်က ကြွက်တွေသောင်းကျန်းတော့ ဈေးသူ၊ ဈေးသားတွေ၊ ဈေးဝယ်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်သွားမယ်''ဟုရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်တွင်
ရှော့ပင်းစင်တာပါ ဗီယက်နမ်စီးပွားရေးစင်တာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်မည်
ဗီယက်နမ်-မြန်မာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရှော့ပင်းစင်တာပါဝင်သော ဗီယက်နမ်စီးပွားရေးစင်တာ (Vietnamese Business Home) တစ်ခုကို လာမည့်နှစ်လအတွင်း စတင်တည်ထောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဗီယက်နမ်လေကြောင်းလိုင်းမှ အထွေထွေမန်နေဂျာ မစ္စတာဖူက ပြောကြားသည်။ ယင်းစီးပွားရေးစင်တာအား ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ အင်အားကြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု တစ်ခုဖြစ်သည့် DONG LUC GROUP က ရင်းနှီးမြှပ်နှံမည်ဖြစ်ကာ ယင်းအတွက် အောင်ဆန်း အားကစားဝင်းအနီးရှိ လေးထပ်အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ဌားရမ်းရန် ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသား အဆောက်အဦ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက် အဆောက်အဦငှားရမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နှစ်လလောက်မှာ စတင် ပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မှန်းထားတာကတော့ ပုံမှန်အခြေအနေအရဆိုရင် နောက်လေးလလောက်မှာ ဒီစီးပွားရေးစင်တာကို စတင်လည်ပတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်” ဟုယင်းကပြောကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, July 21, 2010 Links to this post
နအဖဗိုလ်ချူပ်ကြီးများ ဗိုလ်ချူပ်များ ဗိုလ်မှူးချူပ်များ အရပ်ဝတ် ၀တ်ပြနေပေမယ့် စစ်အာဏာရူးအကျင့်တွေ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ပါ။
နအဖ ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝန် အောင်သိန်းလင်းဟာ နအဖတို့ ရဲ့၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ဖို့ အတွက် မကြာသေးခင်ကမှ စစ်ယူနီဖောင်းတွေ ချွတ်ပြပြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဘ၀ကနေ ဦးအောင်သိန်းလင်းဆိုပြီး အရှင်လတ်လတ် ဘ၀ပြောင်းလဲလိုက်သူဆိုတာ ပြည်သူတွေ သိကြမှာပါ။
ဦးအောင်သိန်းလင်း အပါအ၀င် စစ်ရာထူးကြီးတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖက်တွယ်ထားခဲ့ကြတဲ့ နအဖဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေ ဗိုလ်ချူပ်တွေ ဗိုလ်မှူးချူပ်တွေဟာ အာဏာကို ဘယ်လောက်မက်မောလည်းဆိုတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အာဏာဆက်ယူဖို့ အတွက် အာဏာရရှိရေးသာ သူတို့ အတွက် သေရေးရှင်ရေးမို့ လို့စစ်တပ်ရာထူးတွေတောင် အလွယ်တကူ ပစ်ပယ်ကာ စစ်တပ်အပေါ် အလွယ်တကူ သစ္စာဖောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီ အောင်သိန်းလင်းတို့ လို နအဖ ဗိုလ်ချူပ်တွေ ဗိုလ်မှူးချူပ်တွေဟာ စစ်တပ်မှာ အာဏာယူထားစဉ်တုန်းကလိုဘဲ တစ်သွေးတစ်သံ တစ်မိန့် နဲ့အာဏာကို လွဲမှားဖေက်ပြန်စွာ သုံးခဲ့ကြသလို သူတို့ ရဲ့စစ်အာဏာရူးဘ၀ပုံစံတွေဟာ မပျောက်ပျက်သေးပါဖူး။
အရပ်ဝတ် ချိတ်ပုဆိုးတွေ တိုက်ပုံအင်္ကျီကြီးတွေ ၀တ်ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့်တင်းတင်း လက်သီးတွေ ဆုပ်ပြီး သတိအနေအထားနဲ့မတ်မတ်ကြီး ရပ်နေကြတာတွေ၊ စကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာ အမိန့် သံပါတာတွေ အစရှိတဲ့ ပုံသဏ္ဍန်တွေ မပျောက်ပျက်ကြတာ တွေ့ မြင်ကြားသိရပါတယ်။
နအဖတို့ဟန်ဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားမှာလည်း အောင်သိန်းလင်းဟာ အရပ်ဝတ် တိုက်ပုံအင်္ကျီဝတ် ပုဆိုးဝတ် ခေါင်းပေါင်းဆောင်းထားပေမယ့် သူ့ ရဲ့ဗိုလ်မှူးချူပ်ဘ၀နဲ့အာဏာပေးလေ့ရှိတဲ့ အကျင့်ကို မဖြောက်ဖူးဆိုတာ အောင်သိန်းလင်းရဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေက ပြောဆိုပါတယ်။
စစ်ယူနီဖောင်းချွတ်ပြီး အရပ်ဝတ်လဲပြကာ ပြည်သူကို လိမ်ညာကြမယ့် နအဖဗိုလ်ချူပ်ကြီးများ ဗိုလ်ချူပ်များ ဗိုလ်မှူးချူပ်များ အစရှိတဲ့ စစ်အာဏာရူးနေဆဲဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့မပြောင်းလဲသော စိတ်ယုတ်မာတွေကို ပြသနေပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့သွားလာမှု ပြောဆိုဆက်ဆံမှုပုံသဏ္ဍန်တွေက ယခုလက်ရှိထိ မပြောင်းလဲဘဲ သက်သေပြနေဆဲဆိုတာ အခုလို တွေ့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အောင်သိန်းလင်း လွမ်းသူ့ ပန်းခွေလာချပြီး နောက်ပြန်လှည့်ထွက်တဲ့နေရာကို သေသေချာချာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအတွက် လွမ်းသူ့ ပန်းခွေချအပြီး နောက်ပြန်လှည့်ထွက်တဲ့ အောင်သိန်းလင်းဟာ အရပ်သားတစ်ယောက်လို နောက်လှည့်ပြန်တာ မဟုတ်ဘဲ စစ်သားတစ်ယောက် နောက်လှည့်ထွက်တဲ့ စစ်သားလှုပ်ရှားမှုအတိုင်း နောက်လှည့်အနေအထားနဲ့လှည့်ထွက်တာကို စစ်သင်တန်း တက်ဖူးကြသူတိုင်း သိကြပါလိမ့်မယ်။
သတိအနေအထားနဲ့ညာဘက်ခြေဖ၀ါးကို နောက်ညာဘက် တစ်စောင်းထိုး ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက် ခြေဖနောင့်နှစ်ခုလုံးအပေါ်မှာ ဖိပြီး စုံလှည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနောက် ခြေဖ၀ါးနှစ်ဘက် စုံရပ်ပြီးနောက် ဘယ်ခြေထောက်နဲ့စတင်ထွက်ခွာပါတယ်။ ဒီပုံစံဟာ အရပ်သားတွေ နောက်လှည့်တဲ့ပုံစံ မဟုတ်ဘဲ စစ်သားတစ်ယောက် နောက်လှည့်တဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပြုအမှုဟာ သတိမထားမိဘဲ သာမန်ကာလျှံကာကြည့်ရင်တော့ သိလိုက်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် အောင်သိန်းလင်းဟာ အရပ်ဝတ်ကြီးကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်သာ စစ်ယူနီဖောင်းချွတ်ပြီး ကမန်းကတန်း ၀တ်ပြထားနေရပေမယ့် သူ့ ကိုယ်သူ အာဏာရူး ဗိုလ်မှူးချုပ်လို့ခံယူထားဆဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူ့ ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြသလိုက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အသွင်အပြင်အမူအယာအမှန်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာပြချင်တဲ့စိတ်၊ နိုင်ထက်စီးနင်း ခိုင်းစေချင်တဲ့စိတ်၊ မတရားလုပ်ချင်တဲ့စိတ်၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညဉ်း လုပ်ချင်တဲ့စိတ်၊ ကိုယ်ကျိုးရှာချင်တဲ့စိတ်၊ ပြည်သူကို ညဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ချင်တဲ့စိတ် အစရှိတဲ့ အာဏာရူးတွေမှာ ရှိနေကြတဲ့ ယုတ်မာစိတ်တွေဟာ အရပ်ဝတ် လဲပြ ၀တ်ပြတာနဲ့မပြောင်းလဲသွားပါဖူး။ အဲ့ဒီလိုသူတွေ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကို နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ ဒုက္ခပေးလာနေတာ နောင်လည်း ဒီလို စိတ်မျိုးတွေ ရှိနေဆဲမို့နောင်ကိုလည်း ဒီထက်ပိုဆိုးစွာ ဒုက္ခပေးကြဦးမှာပါ။
ဒါကြောင့်မို့ လို့အပြောချိုပြပြီး မုသားစကားတွေနဲ့ဖုံးကွယ်ကာ ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ပြောပြနေလည်း၊ ချိတ်ပုဆိုးတွေ တိုက်ပုံအင်္ကျီတောင်ရှည်ပုဆိုးတွေနဲ့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် ၀တ်ပြနေလည်း မြေခွေးဟာ ဘယ်လိုဘဲ မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားစွပ်ထား ကျားဟာ ဘယ်လိုဘဲ အခြားအရေခြုံထားခြုံထား သွေးစွန်းနေတဲ့ အစွယ်တဖွားဖွားက သက်သေပြနေပါတယ်။
နအဖတို့ ရဲ့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ပြည်သူ့ အသက်သွေးတွေ ပေကျံနေတဲ့ လူသတ်ကောင်တွေရဲ့တရားဝင် လွတ်မြောက်ရာလမ်း ဖန်တီးနေတာဆိုတာ အားလုံး သိထားကြသလို၊ ဒီ နအဖလူသတ်ကောင်တွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မြောက်အောင် ပံ့ပိုးပေးနေသူတွေကိုလည်း လူသတ်ကောင်တွေကို သိသာထင်ရှားလှတဲ့ လူသတ်မှုကနေ ဂွင်းလုံးကျွတ် လွတ်အောင် အားပေးနေတဲ့သူတွေလို့သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလိုတူ အလိုပါ ကြံရာပါတွေလို သမိုင်းမှတ်တမ်းတင် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အရပ်ဝတ်နဲ့လိမ်ညာပြမယ့် နအဖဗိုလ်ချူပ်ကြီးများ ဗိုလ်ချူပ်များ ဗိုလ်မှူးချူပ်များရဲံ့၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့် ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမှသာလျှင် ပြည်သူတွေ အာဏာရှင်စနစ်ကနေ လွတ်မြောက်မှာပါ။
စက်မှု(၁)ဝန်ကြီးဌာနမှ ၄င်း၏လက်အောက်ရှိ ဝင်းသူဇာ အရောင်းဆိုင်များအားလုံးကို ပုဂ္ဂလိကသို့ ဆက်လက် လွှဲပြောင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်ရှိ ယင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ရောင်းဝယ်ရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်များကို ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင် ၁၃ ဆိုင်ကိုပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ထားသော ရန်ကုန်အပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဝင်းသူဇာ အရောင်းဆိုင်အားလုံးကို ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင် ၈၀ အနက် ၁၃ ဆိုင်ကို တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ပုဂ္ဂလိကကို ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်တွေအားလုံး လွှဲပြောင်းပေးသွားမှာပါ။ ပုဂ္ဂလိက လိုရင်လိုသလို ကျွန်တော်တို့ ညှိနှိုင်းပြီး ချထားပေးသွားမှာပါ။ အဓိကက အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းတဲ့သဘောပါပဲ။ ပြီးတော့ အစိုးရကပဲအားလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားတာမျိုးမဖြစ်အောင် ပုဂ္ဂလိကကိုလွှဲပေးတာပါ” ဟု၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားကြောင်း7Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပိတ်ရက်မရှိ နာရေးကူညီ ဖေးမမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေရာ နိဗ္ဗာန်ယာဉ် မောင်းနှင်သော ယာဉ်မောင်းတို့သည် ရှေ့တန်း တိုက်စစ်မှူးများ ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ရှေ့တန်းမှ အများပြည်သူ (၇) ရက် သားသမီးအပေါင်းတို့အား ဖေးမကူညီမှု တွင် မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်သော ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်တို့သည် အလွန် အရေးကြီးလှသည်။ ထို့ကြောင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် ယာဉ်မောင်းလျှောက် ထားသူတို့အား ယနေ့ ၂၁.၇.၂၀၁၀ (ဗုဒ္ဓဟူး) နေ့တွင် အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်၊ အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ မော်တော်ယာဉ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ၊ ဈာပနပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အသင်းမန်နေဂျာတို့မှ လူတွေ့ခေါ်ယူ မေးမြန်းခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင် သက်တမ်းစစ်ဆေးခြင်းတို့အပြင် အသင်းရှိ ၀န်ထမ်းပို့ဆောင်ရေး မော်တော်ယာဉ်၊ နာရေး နိဗ္ဗာန်ယာဉ်တို့အား လက်တွေ့မောင်းနှင်မှု၊ ကားရပ်နားရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိ မရှိတို့ကို လက်တွေ့ စာတွေ့ စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
အာဆီယံ နဲ့ မြန်မာ့အရေး ပြောကြားချက်များ(ရုပ်သံမြင်ကွင်း)
အာဆီယံ ရပ်တည်ချက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်း သံသယရှိ
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း(၀ဲ) အား ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး(၀ဲ-ဒု)၊ စင်ကာပူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး(ယာ-ဒု) နှင့် လာအို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး(ယာ) တို့ ၀ိုင်းဝန်းမေးမြန်းနေစဉ်။ ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၀။
လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးဖို့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) က တောင်းဆိုလိုက်ပေမဲ့ မြန်မာ့ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေကတော့ စစ်အစိုးရ ကျင်းပပေးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ် တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ် သံသယ ရှိနေကြပါတယ်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပခင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ဖို့အတွက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေရဲ့ စည်းဝေးပွဲအတွင်း မြန်မာစစ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် ဦးဉာဏ်ဝင်းကို အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေက ညစာစားပွဲမှာ ၀ိုင်းဝန်း ပြောကြားခဲ့ကြတာလို့ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဆူရင် ပစ်ဆူဝန် (Surin Pitsuwan) က သတင်းထောက်တွေကို ဒီနေ့ ပြောခဲ့တာပါ။
ဒါကလည်း အာဆီယံက အခုမှ ပြောဆိုလာတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေလောက် မဟုတ်တောင် အာဆီယံ အသင်းကြီး အနေနဲ့ အဖွဲ့ဝင် တနိုင်ငံချင်းစီ အနေနဲ့ရော အသင်းကြီး တခုလုံး အနေနဲ့ပါ မြန်မာစစ်အစိုးရကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဝေဖန် ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတော့ ကြာပါပြီ။
စစ်အစိုးရအနေနဲ့ စစ်မှန်ပြီး လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို အရင် ပြင်ဆင်ဖို့ လိုမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မှတ်ပုံမတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ရပါမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေ ပြင်ရပါမယ်။ အဲဒါမှသာ ဒီမိုကရေစီကို နီးစပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေ မရှိဘဲနဲ့တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ အာဆီယံက ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အညီ All Inclusive ဖြစ်ဖို့၊ Free and Fair ဖြစ်ဖို့၊ International Monitor ကို လက်ခံဖို့၊ ဒါတွေ ပြောသင့်တာပေ့ါဗျာ။”
ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရင် ပြီးရောဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“အာဆီယံကဗျာ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ တကယ်ရှိနေတဲ့ လူတွေ၊ တကယ်လုပ်နေရတဲ့ လူတွေရဲ့ အခြေအနေမှန်ကို သိပ်သိပုံ မပေါ်ဘူး။ သူတို့က ရွေးကောက်ပွဲတခု မျှတရင် ပြီးရော။ ရွေးကောက်ပွဲ တခုတည်းနဲ့ ဘာမှမှ မဖြစ်ဘဲဗျ။ ကျနော်တော့ ဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်ဗျာ။ သူတို့ သိပ်ပြီးတော့ လက်တွေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို သိပုံမရဘူးလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။”
ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်း စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပေါ်ထွန်းလာမှာ မဟုတ်ပေမဲ့ အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို စတင် ပုံသွင်းနိုင်မယ့် အခြေခံတခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ သူတို့အနေနဲ့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကတော့ သုံးသပ်ပါတယ်။
“ကျနော်မြင်တာက ရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံခြင်းဆိုတဲ့ အခြေအနေထက် ရွေးကောက်ပွဲ ဟိုဘက် အပြီးမှာ ဒီမိုကရေစီ ဇာတ်သွင်းခြင်းလောက်တော့ ရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကတော့ လွတ်လပ်၊ တရားမျှတမှုကတော့ တော်တော်အားနည်းတယ်။ ဒီအခြေအနေပေါ်မှာ လွတ်လပ်၊ တရားမျှတမှု ဖြစ်မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဖို့ကတော့ တော်တော်ခက်ခဲတယ်။ ဒီအခြေအနေကတော့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ကျနော် ထင်တယ်၊ လွတ်လပ်၊ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့။
“ဒါပေမဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးထက် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဇာတ်သွင်းနိုင်တဲ့၊ ပါလီမန်ကို ပုံဖော်တဲ့ စနစ်တခု၊ ပုံစံတခုလောက်တော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှ ရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် မျှော်လင့်တယ်။ အဲဒီအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ လမ်းကြောင်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီး ကျနော်တို့ သွားပေးနေတာပါ။ အဲဒီအပေါ်မှာ အာဆီယံ အနေနဲ့လည်း ကျနော် စဉ်းစားသလိုပဲ စဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒီ ဒီမိုကရေစီဟာ ဒီမိုကရေစီ စံချိန် စံညွှန်းအနေနဲ့ တအား အားနည်းနိုင်ပါတယ်။ စစ်တပ်က ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ချယ်လှယ်မှု ပုံစံတွေကို ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးလိုတော့ တက်ပြီး မာရှယ်လောတွေနဲ့တော့ အုပ်ချုပ်နေလို့ မရတော့ပါဘူး။ အမိန့် ဥပဒေတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်နေလို့ မရတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ရှေ့ဆက်သွားရမယ့် ခရီးလမ်းက ခက်ခဲဦးမှာပါ။”
ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံက မြန်မာစစ်အစိုးရကို အခုလို ပြောလိုက်တာဟာ တကယ်တော့ ဝေဖန်တဲ့ သဘောမျိုး ပြောတာမဟုတ်ဘဲ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှု ပုံစံမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာတဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကစလို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်ရေး ပေါ်လစီကို အာဆီယံက တောက်လျှောက် ချမှတ် ကျင့်သုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပေမဲ့ အခုချိန်ထိ တစုံတရာ တိုးတက် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ထွန်းလာတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
ဗီယက်နမ်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံ စည်းဝေးပွဲပြီးရင်လည်း ခါတိုင်း အစည်းအဝေးတွေလိုပဲ စစ်အစိုးရကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့ ကြေညာချက်မျိုး ထွက်ပေါ်လာမှာတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာ့ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီမြို့မှ မဲဆောက်သို့ နေ့ချင်းပြန် သွားရောက် အလုပ်လုပ်နေသည့် နေ့စား အလုပ်သမားများနှင့် ဈေးသည်များ အခက်ကြုံရ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီမြို့ရှိ နှစ်နိုင်ငံဆက်သွယ်ရေး နယ်စပ်ဂိတ်များကို ယခုဇူလိုင် ၁၈ရက်နေ့မှစပြီး ရက်သတ္တပတ်ကြာ ပိတ် ထားသဖြင့် မြ၀တီမှ မဲဆောက်သို့ နေ့ချင်းပြန် သွားရောက် အလုပ်လုပ်နေသည့် နေ့စား အလုပ်သမားများနှင့် ဈေးသည်များ အခက်ကြုံရသည်ဟု မြို့ခံများက ပြောသည်။
မဲဆောက်ဈေးတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို မြဝတီမှနေ၍ လာရောက်ရောင်းချနေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးက “ဂိတ် ပိတ်ထား တော့ ကျမတို့မှာ အခက်ကြုံတယ်လေ။ ကျမတို့က မဲဆောက်မှာ ဈေးသွားရောင်းရတယ်။ အခု ဂိတ်တွေ ပိတ်ထားတော့ သွားလို့ မရတော့ဘူး။ တပတ် စောင့်ရမယ်တဲ့”ဟု ပြောသည်။
မြဝတီတွင် နေထိုင်ကြသူ အများစုသည် မြန်မာပြည်ထွက် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို တရားမဝင်ဂိတ်များမှ ဖြတ်ကျော်ကာ မဲဆောက်သို့ မနက်သွားညပြန် အလုပ်လုပ် စီးပွားရှာနေသူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ယခုလို ဂိတ်များ ပိတ်ထား ခြင်းဖြင့် မြန်မာပြည်သား ကျဘမ်းအလုပ်သမားများနှင့် ကုန်ထမ်းသမားများမှာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ရသည်ဟု သိရသည်။
မဲဆောက်-မြ၀တီ နေ့စဉ် သွားလာနေသည့် ကုန်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက “အခု တံတားကော၊ ဂိတ်တွေကော ပိတ်လိုက်တယ် လေ။ အရင်ကဆို တံတားပိတ်ရင် အောက်လမ်းက ဖွင့်နေသေးတော့ သွားလာလို့ ရသေးတယ်။ အခုတော့ အကုန်ပိတ်တာ ဘာ လုပ်စားရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။”ဟု ဆိုသည်။
သို့သော် တချို့သောဂိတ်များက နားလည်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးများမသိအောင် ခိုးဖွင့်ပြီး သွားလာခွင့်ပြုပေးသည်ဟု ဒီကေ ဘီအေ ဂိတ်မှူးတဦးက ပြောသည်။ “မနက်စောစော ၆နာရီလောက်ကို ခဏတဖြုတ် ဖွင့်ပေးတယ်။ ဖြတ်သွားချင်တဲ့ လူတွေက အများကြီးလေ။ သူတို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေးပြဿနာတွေကို ဒီလိုသွားလာပြီး ဖြေရှင်းလုပ်ကိုင်နေတာ အခုမှ မဟုတ်ဘဲ”ဟု ပြော သည်။
မြ၀တီမြို့တွင် နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ပေါင်း ၃၀ကျော်ရှိပြီး ယခင်က မြို့တွင်း၌ အမှုအခင်းများဖြစ်ပွားလျှင် တရားဝင်ဂိတ်နှင့် တရားမဝင်ဂိတ်အချို့တို့ကို ပိတ်လေ့ရှိသော်လည်း ယခုမူ ဂိတ်အားလုံးကို ပိတ်ထားသောကြောင့် မြန်မာပြည်သူများ သွားလာ ရေး အခက်ကြုံနေရသည်။
မြ၀တီမြို့ရှိ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှု တရားဝင်ဂိတ်နှင့် တရားမ၀င်ဂိတ်များကို ယခုလို ပိတ်ထားခြင်းသည် နေပြည်တော်မှ ရဲမှူးကြီး နှင့် မော်တော်ယာဉ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က မြ၀တီမြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီး လိုင်စင်မဲ့ကားနှင့် ဆိုင်ကယ်များကို လိုက်လံစစ်ဆေး ဖမ်း ဆီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု မြို့ခံကားပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။
“အခုရက်ပိုင်းမှာ နေပြည်တော်က လူကြီးတွေ လာတယ်။ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေကို လိုက်ဖမ်းတယ်။ အဲဒီအတွက် တရားမ၀င်ဂိတ်တွေကနေပြီးတော့ ထိုင်းဘက်က ဆိုင်ကယ်တွေ ခိုးမသွင်းနိုင်အောင် ပိတ်ထားတဲ့သဘောပဲ”ဟု ၎င်းကားပိုင်ရှင် က ပြောသည်။
နေပြည်တော်အဖွဲ့သည် ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှစ၍ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ စတင်ရောက်ရှိလာပြီး ဖားအံမြို့နှင့် ကော့ကရိတ်မြို့ရှိ လိုင်စင်မဲ့ကားနှင့် ဆိုင်ကယ်များကို စစ်ဆေးဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက် မြ၀တီသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကော့ကရိတ်မှ-မြ၀တီ သွားလာနေသော ဆိုင်ကယ် Taxi သမားတဦးက ပြောသည်။
သူက “ကျနော် ကြားရသလောက်က ဖားအံမှာ လိုင်စင်မဲ့ကား အစီး ၄၀လောက် ဖမ်းမိတယ်။ ကော့ကရိတ်မှာက ကားတော့ မသိ ဘူး။ ဆိုင်ကယ်တွေ အများကြီး မိတယ်။ သူတို့ဖမ်းတယ်ဆိုတာက သိမ်းလိုက်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဖမ်းမိတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေ၊ ကားတွေကို လိုင်စင်လုပ်ဖို့ စာရင်းတင်ခိုင်းတယ်။”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့မှစ၍ လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်နှင့် ကားများကို စတင်ဖမ်းဆီးမည်ဟု ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လက မြန်မာ့အ လင်း သတင်းစာထဲတွင် တရားဝင် ကြေညာထားသည်။
ဥသြသံ ဆိတ်သုဉ်းနေဆဲ နေ့
ငယ်စဉ်က ကျောင်းတွေမှာ အာဇာနည်နေ့ မတိုင်ခင် ကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အကြောင်း ဟောပြော ကြပါတယ်။ သတင်းစာ တွေကလည်း အာဇာနည်နေ့ အကြို ဆောင်းပါးတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေကို ဝေဝေဆာဆာ ဖော်ပြကြပါတယ်။
အာဇာနည်နေ့ ရောက်တိုင်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရဲ့ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည်ဟာ အနက်ရောင် ဝတ်စုံကို ဝတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အုတ်ဂူမှာ လွမ်းသူ့ ပန်းခြင်း ချလေ့ရှိပါတယ်။ အာဇာနည် ဗိမ္မာန်မှာ အာဇာနည် မိသားစုဝင်တွေ ဂါဝရ ပြုပြီးနောက်ပိုင်း အများပြည်သူတွေ ဝင်ရောက် အလေးပြု နိုင်ပါတယ်။
အာဇာနည်နေ့မှာ ဘယ်သူမှ မနှိုးဆော်ရဘဲ အိမ်တိုင်းမှာ မိမိအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ အလံတိုင်ဝက် လွှင့်ထူတယ်။ ရပ်ကွက်တွေမှာ သံဃာတော်များကို ဆွမ်းကပ်လှူကြပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားတွေမှာ အလံငယ်လေးတွေ တိုင်ဝက် လွှင့်ထူထားပြီး ကား ဘေးနှစ်ဖက်မှာ အာဇာနည်နေ့ ပိုစတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရတဲ့ မနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်မှာ မြန်မာ့အသံ ရေဒီယိုကနေ ဥသြဆွဲသံ လွှင့်ပေးပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ တမြို့လုံးမှာရှိတဲ့ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေ၊ သင်္ဘောတွေကလည်း ဥသြဆွဲကြပါတယ်။ မောင်းနေတဲ့ ကားတွေလည်း ဥသြသံ ကြားတာနဲ့ ကားကိုရပ်ပြီး အလေးပြုကြပါတယ်။
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တက် ဘုရားဝတ်ပြု၊ အဲဒီကမှတဆင့် အာဇာနည်ကုန်းကို သွားရောက်ပြီး အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို အလေးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ညဘက်မှာ မြန်မာ့အသံက ည ၈း၁၅ နာရီ သတင်း ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မိန့်ခွန်းကို လွှင့်ပေးပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်း ပြီးတာနဲ့ အဆိုတော် ဒေါ်မေလှမြိုင်ရဲ့ အာဇာနည်နေ့အကြောင်း သီချင်းကို ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။
အာဇာနည်နေ့ဟာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က စပြီး အရင်နှစ် အာဇာနည်နေ့တွေနဲ့ မတူတော့ဘဲ လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
အဲဒီနှစ်က အာဇာနည်နေ့မှာ ကျနော်တို့ အုပ်စုဟာ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းဆုံ အုတ်လမ်းဘက်ဆီကို သွားကြပါတယ်။ အားလုံးဟာ မပြေးရုံတမယ် ခပ်သွက်သွက် လျှောက်နေကြပါတယ်။ အုပ်စုထဲက တယောက်ရဲ့ လက်ထဲမှာလည်း ပန်းခွေ ခပ်ကြီးကြီး တခု ကိုင်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ကျဆုံးချိန် ဥသြဆွဲချိန်အမီ အုတ်လမ်း မီးပွိုင့်မှာ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ သံဆူးကြိုးပေါ်မှာ ပန်းခွေချ အလေးပြုဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သားတွေက အာဇာနည်ကုန်း သွားရာလမ်းတွေကို ပိတ်ထားကြပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း အုတ်လမ်း မီးပွိုင့် ရောက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ဥသြဆွဲသံ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ကျနော်တို့ထဲက ပန်းခွေ ကိုင်ထားတဲ့ ရဲဘော်ခင်မောင်လှ ၏ သား အတာ (ခေါ်) တာရာ (စတီရီယိုအဆိုတော်) က ပန်းခွေကို သံဆူးကြိုးပေါ် တင်လိုက်ပြီး ကျနော်တို့ အားလုံး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို အလေးပြုကြပါတယ်။ လမ်းကို ပိတ်ဆို့ စောင့်နေတဲ့ စစ်သားတွေလည်း ကြောင်ပြီးတော့ ကြည့်နေကြပါတယ်။ ဘာမှ တုံ့ပြန်မှုတော့ မလုပ်ပါဘူး။
ကျနော်တို့လည်း အလေးပြုပြီးပြီမို့ ရွှေဂုံတိုင်ကနေ မြို့ထဲကို သွားတဲ့ အချိန်မှာပဲ ရွှေဂုံတိုင် လမ်းဆုံကနေ ဗဟန်း ရေခဲဆိုင် ဘက်ကို ကျောင်းသား လူငယ်တွေ တန်းစီပြီး ချီတက်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့အားလုံး အဲဒီအုပ်စုနဲ့အတူ လိုက်ပြီး ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗဟန်း ရေခဲဆိုင်ရှေ့ ကြက်လျှာစွန်း လမ်းခွလည်း ရောက်ရော စစ်တပ်နဲ့ ရင်ဆိုင်တိုးပါတော့တယ်။ စစ်တပ်က လမ်းကို ပိတ်ထားပြီး ရှေ့ဆက်မသွားဖို့၊ လူစုခွဲဖို့ ပြောပါတယ်။ ရှေ့ဆုံးက ကိုကိုကြီး (၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား၊ ယခုအကျဉ်းကျ) က ကိုင်ထားတဲ့ လော်စပီကာငယ်ကို နောက်ကို ပြန်လှည့်ပြီး အားလုံးထိုင်ကြဖို့ ပြောပါတယ်။ စစ်တပ်က လမ်း မဖွင့်ပေးမခြင်း ကျနော်တို့ ထိုင်သပိတ် လုပ်ကြမယ်ပေါ့။ စစ်တပ်နဲ့လည်း ညှိပြီး လမ်းဖွင့်ပေးဖို့၊ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကို ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း အလေးပြုဖို့ သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆို ဆွေးနွေးဖို့ သဘောထားကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ အားလုံး လမ်းပေါ်မှာ ထိုင်နေကြပါပြီ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ စစ်တပ်က အချိန် ၁၅ မိနစ်ပေးမယ်၊ လူစုခွဲကြဆိုပြီး အော်ဟစ်ပြောဆိုပါတယ်။ ၅ မိနစ်လောက် အကြာမှာ စစ်တပ်က ရှေ့ကိုတက်လာပြီးတော့ ရိုက်ပါတော့တယ်။ ကျနော်တို့လည်း ပြေးရပါတော့တယ်။ ကျနော်တို့အုပ်စုက ကိုဘိုလေး၊ မခင်ခင်ဦးနဲ့ တခြားသူတွေက ပန်းချီပန်းပုကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကို ကျော်ပြီး ပြေးကြပါတယ်။ လူစု ကွဲသွားကြပါတယ်။ ကျနော်လည်း လူအုပ်ကြီးနဲ့ ပြေးရင်း ပလက်ဖောင်းပေါ် လဲကျ သွားပါတယ်။ ကျနော့် ကျောပေါ်ကနေ လူတွေ ဖြတ်ပြီး ပြေးကြပါတယ်။ စစ်သားတွေ ရောက်လာပြီး ကျနော့် ခေါင်းနဲ့ ကျောပေါ်ကို ရာဘာတုတ်နဲ့ ရိုက်ကြပါတယ်။ အချက်ပေါင်း များစွာ ရိုက်နှက်ပြီးမှ သူတို့ ထွက်သွားပါတယ်။ ကျနော်လည်း ခဏလောက် မှောက်လျက်ကြီး ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ အသံတွေ မကြားရတော့တဲ့ အခါမှာ ခေါင်းထောင်ပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လဲနေတဲ့သူတွေကို စစ်ကားပေါ် စပြီး တင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းပြီး တင်ထားတဲ့ စစ်ကား တစီး ဖြတ်သွားတာကိုလည်း တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ စစ်ကားပေါ်မှာ ကျနော်တို့အုပ်စုက ကိုမြင့်နိုင် ပါသွားတာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ကိုမြင့်နိုင်က အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇာတ်နဲ့ အမျိုးတော်ပါတယ်။
လဲကျနေသူတွေကို စစ်ကားပေါ် ဆွဲတင်နေတာ ကျနော်နဲ့ တော်တော်နီးလာပါပြီ။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ထပြေးပါတော့တယ်။ ပြေးနေတုန်း ရှေ့ကသွားနေတဲ့ စစ်သား နှစ်ယောက်က လှည့်ပြီး ရိုက်တာကို ခံရပါသေးတယ်။ ကျနော်လည်း ပန်းချီပန်းပုကျောင်း တဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ကုန်းမြင့်ပေါ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းပေါ်ကို တက်ပြီး ပြေးပါတယ်။ ကျနော့်ကို ဦးပဉ္ဇင်းတပါးက တွဲခေါ်သွားပါတယ်။ နောက်တော့ ကျောင်းကို စစ်သားတွေ ဝိုင်းထားတယ်လို့ ဦးပဉ္ဇင်းက ပြောပါတယ်။ ချက်ခြင်း မထွက်ဖို့၊ ခဏစောင့်ဖို့ ပြောပါတယ်။ ကျနော် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တနာရီလောက် နေပါတယ်။
စုရပ်ကို ကျနော် ပြန်ရောက်တော့ လူစုံနေပါပြီ။ ကျနော် တို့အုပ်စုက မစန္ဒာမင်း ခေါ် ရွှီးနဲ့ ကိုမြင့်နိုင်တို့ ၂ ယောက် အဖမ်းခံရပါတယ်။ ကိုမြင့်နိုင်က နောက် ၂ ရက်လောက် နေတော့ ပြန်လွတ်လာပေမယ့် မစန္ဒာမင်း(သုံးရောင်ခြယ်)ကတော့အဲဒီအချိန်မှာထောင်ကျသွားပါတယ်။(ယခုတွင်လည်းနောက်တကြိမ်အကျဉ်း
ထောင်ထဲတွင်ထောင်ဒဏ်(၆၅)နှစ်ကျခံနေရဆဲပါ)။ အဖမ်းခံရပြီး ထောင်ကျသွားတဲ့ တခြား အဖွဲ့အစည်းက ကျောင်းသား လူငယ်တွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ စစ်သားတယောက်က လှံစွပ်နဲ့ ထိုးလို့ ကျနော်တို့ အုပ်စုထဲက ဘောကြီး ခေါ် ကျော်စိုးနိုင် လက်မှာ ဒဏ်ရာရပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ၁၉၈၉ အာဇာနည်နေ့မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေ ပါပဲ။ အဲဒီနှစ်ကစပြီး ယခုချိန်ထိ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ ရောက်တိုင်း အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့ ကျဆုံးချိန် ဥသြဆွဲသံကို မကြားကြရတော့ပါဘူး။ အိမ်တွေမှာလည်း အလံတိုင်ဝက် လွှင့်ထူတာကို တချို့ မြို့နယ်တွေမှာ အာဏာပိုင်တို့က ပြဿနာရှာ အရေးယူတယ် လို့တောင် ကြားနေရပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာလည်း အာဇာနည်နေ့ ဟောပြောပွဲတွေ မလုပ်တော့ပါဘူး။
တပ်မတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ တွေ့ရပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, July 20, 2010 Links to this post
﻿ ညနေစောင်းမှာ နွံနစ်သည့်ကြာ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရန် ဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦးကို တိုက်တွန်းရတော့မှာမို့...
ညနေစောင်းမှာ နွံနစ်သည့်ကြာ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရန် ဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦးကို တိုက်တွန်းရတော့မှာမို့...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ခြေလှမ်းတရပ်မဟုတ်။ ခွေးကတက်မဟုတ်။ တဆင့်နီးစပ်သည့် နိုင်ငံရေးလမ်း မဟုတ်။ ဗြောင်လိမ်ထားသော လုပ်ကြံမှူသက်သက်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ တကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ယင်းရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က မဲအပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီ။ ပြည်သူတွေက လွတ်လပ်စွာမဲပေး၍ အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ သမိုင်းအမှန်ဖြစ်သည်။
ယခု၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤရွေးကောက်ပွဲသည် ခွေးကတက် မဟုတ်။ လမ်းစ မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဒါရိုက်တာတင်သန်းဦးရိုက်ကူးသည့် (အရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ) ဇာတ်ကားထဲက ခန့်စည်သူပြောသောစကားမှာ စစချင်း လူတိုင်း၏ ရင်ကို ဆောက်နှင့်ထွင်းလိုက်သည်။ ယင်းမှာ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြခံဥပဒေကို တခဲနက် ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြသည်ဟု ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်သည် မဆလပါတီ၏ အဆိုးရွားဆုံး တပါတီအာဏာရှင်စံနစ်ကို ကျင့်သုံးနေချိန်ဖြစ်သည်။ဒါရိုက်တာတင်သန်းဦး နေထိုင်သောပြည်နယ် မြို့ နယ်တွင် မည်သူက ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်လာသည်ကိုမျှ သူကိုယ်တိုင်ပင် မသိရှိခဲ့သူဖြစ်သည်.။ လူတိုင်းလူတိုင်းသည် မည်သူမှန်း မသိသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို ဖြူသည် မဲသည် မသိ ။ ယင်းအချိန်က ကျွန်တော်တို့ မှာ ဘာမျှမသိဘဲ မမြင်ဖူးပါဘဲ မဲပေးခဲ့ရသည်။ ၄င်းမှာ စစ်အစိုးရကို ကြောက်၍ မဲပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ကို ဒါရိုက်တာတင်သန်းဦးက တနိုင်ငံလုံးက မဲကိုကြိုက်၍ တခဲနက်ထောက်ခံ ပေးခဲ့ကြသည် ဆိုရာ သမိုင်းကို အတိအကျ လိမ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗိုလ်နေ၀င်းရှုပ်သမျှ စာအုပ်ကျတော့ မဖတ်ရဆိုပြီး- အကွဲအပြဲစာအုပ်ကတော့ ဖတ်ကြည့်ခိုင်းသော ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာမူ ဟာသဖြစ်နေသည်။ တော်ပါသေးသည်။ ပြည်ပမှထုတ်ဝေနေသော စာအုပ်စာတမ်းများကို နအဖစစ်အုပ်စုက သူတို့လက်ထဲတွင် ယင်းစာအုပ်များကို ၇ရှိထားပါသည်ဟု ဖေါ်ပြခြင်းကို ၀မ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုလိုက်ရသည်။
မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒ စာအုပ်များကိုလည်း သူတို့မှာ သေသေချာချာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရပါသေးသည်။
ချည်မျှင်နှင့့်် အထည်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားများမှာ ရေဒီယိုနားထောင်ပြီး သတင်းများရေးသားကူးယူကာ ထောက်လှမ်းရေးဌါနသို့ ပေးပို့နေရသည်မှာ ယခုထိတိုင်အောင် လုပ်နေရပါသည်ဟု မကြာသေးခင်က ပုဂ္ဂိုလ်တဦးပြောပြပါသည်။ ယင်းစာအုပ်များကို ရေးသားကြခြင်းအား မီဒီယာသမားတွေက ၀ါဒဖြန့်ချီနေသည်ဟု ဆိုထားပြန်သည်။
စင်စစ်တင်သန်းဦးသည် ငါ့စကားနွားရလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကောင်းတဦးအနေနှင့် ရိုက်ပြနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ -စစ်အစိုးရအတွက် မီဒီယာလက်နက်ကို တိကျစွာအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။
ရဲများအတွက် ပြဿနာတခုမှာ ပြည်သူ့ရဲကို ကျီးကန်းဟု နာမည်ပေးလိုက်သေးသည်။ ကျီးကန်းဆိုသည်မှာ သူခိုးမျက်စိဖြင့် လူကို စောင်းကြည့်နေတတ်သည်ကို သူခိုးကျင့်သူခိုးကြံရှိသည်ဟု ခိုင်းနိုင်းပြောဆိုလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒါရိုက်တာတင်သန်းဦးက ရဲများကို ကျီးကန်းဟု နာမည်ဘွဲ့တလုံးပေးလိုက်သည်မှာ ရဲတဖွဲ့လုံးကို စော်ကားလိုက်သလိုဖြစ်ပြန်သည်။
﻿ပြီးတော့ ခိုင်သင်းကြည်ပြောသလို အများနည်းတူလိုက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မဲပေးလို့ မဲအနိုင်ရရှိခြင်း မဟုတ်။ ယင်းတုန်းက မဲပေးသော ခိုင်သင်းကြည်သည် ဘာကြောင့် မဲပေးသည်ကို တနေ့ ပြည်သူတွေအား ၀န်ခံ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုရန်လိုသည်။
သမိုင်းကို လိမ်မှန်း သိရဲ့ သားနှင့် ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်များက ဤသို့ပြောဆိုကြလျင် ထမင်းရှင်မျက်နှာကို မထောက်သော လူတန်းစားမျိုးဖြစ်သည်။ ခွေးတိရစ္တာန်များတောင်မှ သခင်ကိုသိကြသည်။ ထို့ကြောင့် ခွေးထက်အသိဥာဏ်ရှိသော ခိုင်သင်းကြည်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မဲပေးရခြင်းအကြောင်းအား ပြတ်သားစွာ ရှင်းလင်းပေးရန်လိုသည်။
ဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦးမှာ မဲပေး၍ အာဏာမရရှိခဲ့မူအကြောင်းကို သို့မဟုတ် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အကောင်အထည် မဖေါ်ပေး၍ ခုအချိန်ထိ ပြဿနာဖြစ်နေသည်ကို ရေငုံနုတ်ပိတ်ထားလိုက်သည်။ သမိုင်းအမှန်ပြနေပါလျှက် ဘာတခုမျ ဇာတ်ဝင်ခန်းအတွင်း ထည့်မပြောခဲ့။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက အာဏာသိမ်းသောအခါ သမတစပ်ရွှေသိုက်အိမ်တွင် သေနတ်ဖြင့်် ပစ်သတ်၍ ဖမ်းဆီးမှူကြောင့် သမတ၏သားမှာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ အာဏာသိမ်းပြီး ၅ လအကြာ ဇူလိုင်ရ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသားများကို ရက်ရက်စက်စက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်း သတ်ဖြတ်သည်။ ညဉ့်သန်ခေါင်တွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ကျောင်းသားများ ပုန်းအောင်းနေသည့်အထင်ဖြင့် ဒိုင်းနမိုက်နှင့် ဖြိုခွဲပစ်ဖေါက်လိုက်သည်။
ဒါရိုက်တာတင်သန်းဦးသည် ဘာကြောင့်များ သမိုင်းဖြစ်ရပ်အမှန် ဆိုပြီး ယင်းအကြောင်းများကို ခန့်စည်သူအား သရုပ်ဆောင်ရန် မပြောကြားခဲ့ပါသနည်း။ သမိုင်းဆိုသည်မှာ လ်ိမ်၍ညာ၍မရ။ ၄င်းပြဿနာတို့မှာ မကြာသေးသောအချိန်များကသာဖြစ်သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ် ၂ ရက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၅ နှစ်အကြာ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ တွင် ဆန်ပြဿနာအရေးအခင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်းနေ့တွင် ဆန်ကိုရောင်းချပေးပါသည် ဆိုသော ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးများအား ရာကျော်ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ သြဂုတ် ၁၃ ရက်နေ့သည် ကျွန်တော်ပြုလုပ်သော ဆန်ပြဿနာ ဖြေရှင်းပါ- ရခိုင့်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် ဆိုသော - ပိုစတာဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် စတင်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့သောနေ့ဖြစ်သည်။ ယင်းနေ့တွင် လူပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ကြသည်။ ဤအကြောင်းကို သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းဆိုပြီး ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ပြနေသော တင်သန်းဦးသည် ဘာကြောင့်များ ထိမ်ချန်ပြီး ထားခဲ့ပါသနည်း။
၈၈ အရေးအခင်းသည် ဦးနေ၀င်း၏ စစ်တပ်ဆိုတာ လူကိုတည့်တည့်မှန်အောင် ပစ်တယ်။ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး ဆိုပြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအား ရက်ရက်စက်စက် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ခိုင်းခဲ့သောကြောင့် သွေးစွန်းခဲ့ရသော နေ့ရက်များဖြစ်သည်။ ယင်းကာလက စစ်တပ်သည် ပြည်သူပေါင်းများစွာကို ထောင်နှင့် ချီ၍ ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ ပြည်သူတို့မှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေးရသည်။ တိုင်းတပါးများသို့ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်များကို (အရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ )ဆိုပြီး ရိုက်ခြင်းထက် (ညနေစောင်းမှာ နွံနစ်သည့်ကြာ )ဆိုပြီး ရိုက်လျင် မိန်းခလေးများ၏ ဘ၀သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များကို ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်ပြသကြမည်ဖြစ်သည်။
၈၈ မှသည် ယခုအချိန်ထိ ပြည်ပနိုင်ငံခြားတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့မှာ ဒုက္ခသည်ဖြစ်နေကြရသည်မှာ သန်းနှင့်ချီ၍ ရှိနေပါပြီ။ ယင်းဒုက္ခသည်တို့မှာ စစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မူကြောင့် ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်တော့ မဟုတ်တန်ရာ။ အဘယ့်ကြောင့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်ကို ဒါရိုက်တာတင်သန်းဦးမှာ မျက်မှောက်ကာလ၌ ပြည်သူတွေ ခံစားနေကြသည်ကို မရိုက်ပြရဲပါသနည်း။၁၈ နှစ်ပြည်လျင် မဲပေး၍ရပြီဟု ပြောနေသည်မှာ ယင်းဇာတ်ကား၏ အနှစ်သာရထင်သည်။ ပါဝင်သူတိုင်း ပြောနေကြသည်။ မည်သူ့ကို မဲပေးချင်သည်ကို သားသမီးများအား မိဘများက ပြောဆိုခန်းမပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြနေသော ခန့်စည်သူနှင့် ခိုင်သင်းကြည်မှာ ကြံ့ဖွံ့ကိုလည်း မဲပေးရန် မပြော။ တစညကိုလည်း မဲပေးရန်မပြော။ မည်သည့်နေ့မှာ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရန်လည်း မပြောမဆို။ သည်တော့ ၀ါဒဖြန့်ချီရာ၌ပင် ကွက်လပ်တွေက ဟာနေသည်။ စစ်အစိုးရကြိုက်အောင် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီ ဆိုလျှင်ပင် လုံလောက်နေပြီဟု ထင်သည်။ သို့သော် ဤနေရာ၌ ဒါရိုက်တာတင်သန်းဦး အမှားကြီး မှားသွားပြီဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိတ်သတ်တို့သည် မဲပေးရန် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီ ဆိုသောစကားကို ကြည့်နေချိန်အတွင်းမှာပင် ရယ်ကြသည်။
အကြောင်းမှာ ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီဆိုသော သူတို့မှာ ဘယ်တော့မဲပေးရမှာလဲ ဆိုသောမေးခွန်းကို မပြောကြ၍ဖြစ်သည်။ မဲပေးမည်ဟုပြောသောသူတို့မှာလည်း ဘယ်သူ့ကို မဲပေးချင်သည်ဟု ထုတ်မပြော။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲကို မ၀င်။ မှတ်ပုံမတင်။ သပိတ်မှောက်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် အခြားပါတီများကို မဲပေးချင်သည်ဟု ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းမျိုးမတွေ့ရ။
ဒါရိုက်တာတင်သန်းဦးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်အား ယင်းကား၌ နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဟု ခန့်စည်သူအား သရုပ်ဆောင်ခိုင်းရာ၌ ထည့်သွင်းပြောဆိုခိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မခိုင်းခဲ့။ သမိုင်းကို ဗြောင်လိမ်ပြီး စစ်အစိုးရအကြိုက် လိုက်ရသော ဤဒါရိုက်တာတင်သန်းဦးမှာ သန်းရွှေထက်ပင် ကြောက်စရာကောင်းသော မီဒီယာလူသတ်သမားဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူကို သူအာဏာရရှိရေးအတွက် လူဦးရေအလိုက် သတ်သည်။ ယခုဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦးမှာ ငယ်ရွယ်နုပျိုသော မြန်မာနိုင်ငံသားလူမျိုးတမျိုးလုံးအား သမိုင်းအမှားကို နောင်မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ အမှတ်မှား အသိမှားဖြစ်အောင်လုပ်သော ဦးဏှောက်ဖျက်ဆီးရေးသမားဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်သည် ဗကပ၏ နေ၀င်ချိန်မဟုတ်။ နအဖစစ်အစိုးရ၏ နေ၀င်ချိန်ဖြစ်သည်။ ဗကပမှာ ဖြုတ်ထုတ်သတ်လမ်းစဉ်ရှိခဲ့သည်ကို ငြင်းဆိုသံမကြားဖူး။ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော သူတို့ပါတီ၏ အကြောင်းကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ယင်းကား၌ ပြသနေရသနည်းမသိ။ တခုတော့ရှိသည်။ လွတ်လပ်ရေးမှာ အတုအယောင်ပဲ ဆိုသောစကားသည် ယင်းကား၌ အကောင်းဆုံးပြောင်မြောက်သော စကားဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်းအကြောင်းကိုလည်း မကောင်းမပြော။ လက်ရှိလူသတ်သမား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအကြောင်းကိုလည်း ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း မပြောသည်မှာတော့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန် မဟုတ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်တို့ -ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် အကျယ်ချုပ်နှင့် အဖမ်းဆီးခံနေရပုံတွေကို ရိုက်ပြမှ သင့်တော်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုပြသောကားမှာ လူငယ်မောင်မယ်များနှင့် ပြည်သူတို့အား မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြသသောဇာတ်ကားမဟုတ်ချေ။ တနည်းအားဖြင့် ဖျော်ဖြေရေးပြသောကား မဟုတ်ပြန်သောကြောင့် မီဒီယာဝါဒဖြန့်ချီရေးကားသာဖြစ်သည်။
ဆိုရလျင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို စစ်အစိုးရက လုပ်ချင်နေသည်။ လူတွေကို မဲပေးစေချင်သည်။ ကြံ့ဖွံ့ကို မဲပေးရန်အထူးလိုလားနေသည်။ ကြံ့ဖွံ့နှင့် တစညတို့သည် စစ်အစိုးရ၏ ပါတီဖြစ်သည်။ မသိနားမလည်သောသူများက ကြံ့ဖွံ့ကို မဲပေးချင်ပြီး တစညကို မဲပေးလျင်လည်း စစ်အစိုးရကို မဲပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့မှာ တွက်ချက်ထားကြပြီးဖြစ်သည်။
ယခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်သည် နယူးယောက်မြို့ မှာ ဖိနပ်စာမိသွားသူဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံကို တက်ရောက်ရန်လာကြစဉ် သိန်းစိန်ကော ဥာဏ်ဝင်းပါ ဖိနပ်ဖြင့် ပစ်ပေါက်ခံသွားရ၍ အမေရိကန်ရဲများက တင်းကြပ်စွာခေါ်သွားရပြီး ကားဖြင့်နောက်ဖေးဘက်က လှည့်ပတ်ထွက်ပြေးခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ ယင်းဖိနပ်သိန်းစိန်မှာ ကြံ့ဖွဲ့ပါတီမှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ရာ တွေးကြည့်က သိနိုင်သည်။
စင်စစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြုလုပ်ချင်နေသောသူတို့မှာ ဗကပသည် အဖျက်သမားများဟု ပြောလိုသည်လားမပြောတတ်။မျက်မှောက်ကာလမှာမူ ဗကပနှင့် နအဖစစ်အစိုးရတို့ ၏ ပြသနာမဟုတ်ချေ။ ဗကပ ကလည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်မပြိုင်။ အသိအမှတ်လည်းမပြု။ ဦနု အစိုးရခေတ်နှင့် တပါတည်းဖြစ်ခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာများကို ပြနေသည်မှာ ဘာကြောင့်များမှန်းတော့မသိ။
သို့သော် သူတို့ပြောနေသောစကားတခွန်းမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေက နိုင်ငံရေးလုပ်စား၍ နိုင်ငံပျက်စီးသွားရခြင်းဟု ပြသနေခြင်းမှာ တမျိုးဖြစ်နေသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရက ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ အာဏာသိမ်းတက်လာသည်ကို တခွန်းသာပြောပြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအား သတ်ခဲ့ရခြင်းကို ဘာမျှမပြောချေ။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ လာခဲ့ကြသည်ကိုလည်း ပြသထားသည်ကိုက တပ်မတော်အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပင် လိုချင်၍ တော်တော်ကြီး လုပ်ခဲ့ရသလိုပင်ဖြစ်သည်။ ၈၈ ခုနှစ်အရေးအခင်းကာလကို ပြသသည့်အခါမှာလည်း ခေါင်းဖြတ်သောသတင်းကို ပြလိုက်သေးသည်။ စစ်တပ်မှ လူသတ်သည့်အကြောင်းအရာများ တစက်မျှ မပါ။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဆွေးနွေးပုံများမပါ။ တချိန်တည်းမှာ ဦးနုက စင်ပြိုင်အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို မပြသ။
အထုးသဖြင့် "ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်သောအခါ အရွေးမမှားဖို့ ၊ဦးဏှောက်နှင့် အသိတရားနှင့် ယှဉ်ပြီးစဉ်းစားပြီး မဲထည့်ပေးဖို့ .." ခန့်စည်သူကြေ့ပာသွားသည်။ သည်တော့ အရွေးမှန်အောင် ဘယ်သူ့ကိုများ မဲပေးရမှာလဲ ..ဆိုသောစကားကို ဒါရိုက်တာတင်သန်းဦးက ဘာကြောင့်များ မပြောဝံ့သနည်း ။
နောက်ဆုံးမှာ ၀ါဒဖြန့်ကားသက်သက်ဖြစ်ကြောင်း နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ် လူသတ်သမားတွေ၏ ပုံတွေကိုပဲ ပြနေသည်။ လူတွေစီးပွါးရေးကျဆင်းလို့ ချွတ်ချုံကျနေသည်ကို တခွန်းမျှမပြောဘဲ- တံတားတွေ ဆောက်။ တိုက်တွေ ဆောက်ခြင်းများ- အဖက်လုပ်ပြီး ပြောနေသည်မှာ ရီစရာဖြစ်နေပါသည်။
ပြည်တွင်းတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ပြဿနာဖြစ်နေသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အကောင်အထည်မဖေါ်ပေး၍ နအဖစစ်အစိုးရမှာ ဖင်ပူနေရသည်။ ရာဇပလ္လင်မြဲအောင် မနည်း ကြိုးစားနေရပါသည်။ တနေ့ ကံဆိုးသောနေ့တွင်မူ အ၀ီစီချောက်ထဲ ထိုးကျလျှင်တောင်မူ ချက်ချင်းပေးလွှတ်ကြမည် မဟုတ်။ လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး မသေမချင်း ရုံးတင်တရားစွဲဆိုကြအုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ သိသင့်သိထိုက်သော သမိုင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယပြဿနာမှာ ကျောင်းသားများဖြစ်သည်။ ၈၈ အရေးအခင်းတွင် ကျောင်းသားများစွာ ထောင်ထဲရောက်ကုန်သည်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ တောထဲတောင်ထဲမှာ သေဆုံးကုန်ကြရသည်။ ပြည်ပမှာကျောင်းသားတို့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးလုပ်နေကြသည်။
တတိယပြဿနာမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းမှ ရဟန်းသံဃာများဖြစ်သည်။
နအဖစစ်အစိုးရသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မဲပေးကြရန် အထူးကြိုးစားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သေချာပြီဆိုလျင် မဲပေးရမည့်နေ့ကို ကောက်ကာငင်ကာ ကြေညာမည့်သူများဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရကို ဖါး၍ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်မည့် ပါတီများမှာ အရိုးများသည်။ ချေးများသည်ဆိုပြီး စကားပြောနေပါသည်။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ပင် ထွက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးကို အားရပါးရြေ့ပာဆိုကြပါသေးသည်။ ခုတော့မူ ယင်း ငဖါးပါတီများသည် ငြီးငြူသည်တောင်မှ အဖျားဆွတ်ပြီး ငြီးငြူနေပြသေးသည်။ သူတို့အား ပြည်သူတို့သည် တစက်ကလေးမျှ ယုံကြည်ရန်အကြောင်းမရှိချေ။ သနားစရာလည်း မလိုပေ။
ပြည်တွင်းကပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တိတိကျကျ ဖျက်ဆီးရပ်တန့်ရေးမှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးအတွက် ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဆိုသည်မှာ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ယခုအချိန်တွင် တရားဝင်ရပ်တည်နေရသော နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်ချေ။ သို့သော် လူထုကြားမှာအမြဲရှိနေပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံတကာအစိုးရများမှလည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမပြုလုပ်ခင် မည်သို့ပြုလုပ်ချင်သနည်းဆိုသော မေးခွန်းမျိုးကို မေးမြန်းနေပါသည်။ ပြည်တွင်း၏နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ ပစ္စက္ခကာလမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တခုတည်းသော ပြောနိုင်သောစကားမှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသာဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာ၌ ပြည်တွင်းမှကော ပြည်ပမှပါ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များသည်၎င်း။ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ နိုင်ငံရေးသမားများသည်၎င်း။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ ဆိုသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားရန်လိုပါသည်။ ယင်းမှာ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးဖြစ်ပါသည်။ နအဖစစ်အစိုးရသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အရပ်သားအစိုးရအဖြစ် ဘယ်တော့မှ အသိအမှတ်ပြုပြီး လုပ်ပေးစရာမရှိ။ သည်တော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဘဲ လုပ်စရာရှိပါသည်။ ပြည်တွင်းမှာ လူထုအစိုးရဖွဲ့လျှင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် လူထုအစိုးရဖွဲ့စည်းသောအခါ ပိုးစိုးပက်စက်မဖြစ်ရအောင် ပြင်ဆင်မူများပြုလုပ်ရန်လိုပါသည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းမှပုဂ္ဂိုလ်များ။မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များသည် ပြည်ပရှိနိုင်ငံရေးသမားများအား လူထုအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီတခုကို ဖွဲ့စည်းကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရန် လိုနေပြီ။
ယခုအချိန်တွင် ပြည်ပမှအဖွဲ့အစည်းတချို့ မှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြောင်း နိုင်ငံတကာများသို့ ထွက်ခွါကြေညာပြောဆိုနေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ နိုင်ငံရေးရေစီးကြောင်းသည် နှစ်လမ်းသွားဖြစ်နေကြောင်းကို ကျွန်တော့်မှာ မကြာမကြာ ပြောဆိုရေးသားဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်တော်တို့က သပိတ်မှောက်ပါသည်ဟု ပြောဆိုသည့်တိုင် ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအစိုးရများသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးဆိုကာ တိုက်တွန်းပြောဆိုနေပါသည်။ ယင်းမှာ လုံးဝမှားယွင်းသော ပြဿနာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့နှင့် တယောက်တလမ်းဖြစ်နေပါသည်။
ကျွန်တော်တို့မှာ ယခုအချိန်တွင် ယင်းထက်ပို၍ တဆင့်တက်ကာ ပြုလုပ်ရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ လူထုအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းနိုင်လျင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရုံပဲရှိပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ဖြစ်သောကြောင့် လူထုအစိုးရဖွဲ့လျှင် နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုရန်လိုပါသည်။ ပြည်တွင်းတွင် လူထုအစိုးရဖွဲ့လျင် အသိအမှတ်ပြုသည်ဟုဆိုပါက နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ကို ခေါ်၍ရပါပြီ။ အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ ပိုးစိုးပက်စက်မဖြစ်။ ချက်ချင်းပြည်သူတရပ်လုံး၏ အသက်စည်းစိမ်ချမ်းသာတို့ကို ကူညီစောင့်ရှောက်ရန် အရပ်သားလူထုအစိုးရက ဖိတ်ကြားလိုက်လျင် အခြေအနေတို့သည် ကိုယ့်ဘက်မှာ ရှိလာပါလိမ့်မည်။
အမေရိကန်။ကနေဒါ။ဂျပန် ၊ဥရောပ နိုင်ငံများမှာ နေထိုင်ကြသော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှာ မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမှ ပြည်သူ့လွှွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ။အတိုက်အခံများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် အခုအချိန်မှာ အထူးအရေးကြီးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကို အမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းပြီး လူထုအစိုးရဖွဲ့က အသိအမှတ်ပြုပါမည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးမှသာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဖျက်ဆီးခံရပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
ဤသည်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ချေမရှိသည့် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်နေသ...
မြန်မာပြည်တွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှု...
မြန်မာပြည်သူတွေ ရဲ့ အမြင်အာရုံကို ပြန်လည်ကောင်းမွ...
နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဆရာမကို စစ်အာဏာရှင် နအဖ တပ်မှ စစ်သာ...
အခွန်တံဆိပ်မရှိသော အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက်မ...
ပွဲရုံဝင်း ယာဉ်ဝင်ခ ဂိတ်ကြေး ကောက်ခံသူများအနေဖြင့်...
တနင်္သာရီတိုင်းတွင် အကြီးဆုံးတည်ဆောက်နေသော ကြယ်ငါးပွ...
ပြည်တွင်း ၊ပြည်ပ အများပြည်သူလူထုအလှူရှင်အပေါင်းကျေ...
ထောင်ဆိုတာကတော့ လူ့ပြည်က အပယ်ဘုံ တဘုံပါပဲ ( ဦးဝင်...
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်င...
စစ်အာဏာရှင် အကြီးအကဲ အိန္ဒိယခရီးစဉ် လူ့အခွင့်အရေး လ...
ရန်ကုန်ရှိ ဈေးကြီးအချို့ ကြွက်နှိမ်နင်းရေး ယခင်ထက...
ရှော့ပင်းစင်တာပါ ဗီယက်နမ်စီးပွားရေးစင်တာ မြန်မာနို...
နအဖဗိုလ်ချူပ်ကြီးများ ဗိုလ်ချူပ်များ ဗိုလ်မှူးချူပ...
အာဆီယံ နဲ့ မြန်မာ့အရေး ပြောကြားချက်များ(ရုပ်သံမြင်...
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီမြို့မှ မဲဆောက်သို့ နေ့ချ...
﻿ ညနေစောင်းမှာ နွံနစ်သည့်ကြာ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရန် ဒါ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒထပ်ဟပ်ပေါ်...
တပါတ်အတွင်း ပြည်တွင်းသတင်း (ရုပ်သံ မြင်ကွင်း)
စစ်အာဏာရှင်လက်ထက် ရန်ကုန်မြို့ ၊ အာဇာနည်ဗိမ္မာန် တွ...
(၆၃)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် လူငယ်စကားဝို...
'အာဇာနည်စိတ်'ဟု ခေါ်ထိုက်သည့် စိတ်မျိုးကား အဘယ်နည်း...
လူထု ဦးလှ ရေးသားတဲ့ "ကိုသုခ၊ အသက် ၄၁ နှစ်အတွင်း၊ ...